Published on Saturday, 06 August 2016 08:59
မြန်မာသရ (၂၂)လုံးတို့တွင် အပါအဝင် ဖြစ်သော (၄)လုံးမြောက်သရ။
(၁)နူးညံ့ပျော့ပျောင်းသော။ "ဒီအင်္ကျီပိတ်စဟာ အမျိုးအစား ကောင်းတယ်။ အိနေတာပဲ။"
(၂)ထိန်းနိုင် တင်းနိုင်စွမ်းနည်းသဖြင့် ညွတ်သော။ "သစ်ကိုင်းဟာ တဖြည်းဖြည်း အိလာလို့ အိမ်မိုးနဲ့ထိလုနေပြီ။"
Published on Saturday, 06 August 2016 08:55
မြန်မာသရ(၂၂)လုံးတို့တွင် အပါအဝင်ဖြစ်သော (၃)လုံးမြောက်သရ။
ဖြစ်ပါသည်။ (မောင်ယဉ်နွယ်။ မြဝတီ၊ ၁၉၇၉၊ ဧပြီလ)
Published on Tuesday, 02 August 2016 17:57
ပါဠိအလို ဗျည်း(၃၃)လုံးအနက် နောက်ဆုံး (၃၃)လုံးမြောက်ဗျည်း ဖြစ်၏။ အစုမဟုတ်သော အ-ဝဂ်အက္ခရာ အ-ဟု ခေါ်သည်။ အသံ၏ဖြစ်ပေါ်ရာဌာန ဌာန်အားဖြင့် လည်ချောင်းအရပ်မှဖြစ်သော ကဏ္ဌဇအက္ခရာ ကဏ္ဌဌာန်ဖြစ်သည်။ နှုတ်ခမ်းကို ပိတ်၍ ရွတ်ဖတ်ရသော သံဝုဋပယတ်လည်း ဖြစ်သည်။ ဖြစ်ခြင်းအကြောင်း ကရိုဏ်းအားဖြင့် သကဌာန် ကရိုဏ်း ဖြစ်သည်။ (မြန်မာမှုအဘိဓာန်-မောင်ဇနိယ)
(၃)မောဟ-အမြင်မှန် မရသဖြင့် အမှန်ကို မသိခြင်း။
အကိုတစ်ယောက်သို့ (ရေး-သန်းဖေလေး၊ ဆို-ချစ်စပယ်
(ချစ်သောအစ်ကိုတစ်ယောက်ရယ်...အယူအဆတွေ လွဲမှားနေသမျှ ကိုယ့်ဘဝအတွက် ရင်လေးမိခဲ့တယ်... တစ်ကယ် တော့လဲ ကိုရယ်... အနောက်တိုင်းရဲ့ယဉ်ကျေးမှုများကြားဝယ် ပျော်မွေ့လိုသူ အစ်ကို့အဖြစ်များရယ် ရင်နာစရာ ကောင်းလှပါတယ်)၂...။
ညီမက မြန်မာမှု မြန်မာဟန်များ နှစ်သက်သူ အစ်ကိုက အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှု ဆိုရှယ်လောကမှာ ပျော်မွေ့သူ... အဲဒီနှစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝဟာလဲ ဘယ်လိုများ ပေါင်းစပ်မှုမျိုး ရမှာလဲ အစ်ကိုရယ်...။
အဲဒါကြောင့်မို့ကွယ် ညီမနဲ့အစ်ကို အဆင်မပြေမှုများ ထပ်ဆင့်လို့သာ မြင်ခဲ့ကြရတယ်... သံယောဇဉ်ကြီးမားမိသူ အနေနဲ့ လမ်းခွဲကြရမှာများကို စိုးတရွံ့ရွံ့ ဒီလိုအဖြစ်မျိုးလဲ မကြုံလိုပါတယ် အစ်ကိုတစ်ယောက် သတိတရားရမယ့် လူများကိုကွယ် (စောင့်မျှော်နေမယ်)၂... အစ်ကိုရယ်...။
အကျကောက်သည် (စကားလုံး အဓိပ္ပါယ် အရကောက်သည်၊ စိတ်အဆိုး လွယ်သည်၊ အတွေးနှင့် ခံပြင်းသည်)
စကားလုံးများကို ပြောဆိုသောအခါ မူလအဓိပ္ပါယ်အစား စကားလုံး အနက်ကျကို လေးနက်စွာ ဆက်လျှောက် တွေးဆ၍ စိတ်အလို မကျခြင်း ဖြစ်တတ်သူများ ရှိလေသည်။ ပုံစံအားဖြင့် "မင်းအဖေ ရှိသလား" ဟု ​အဖေ အိမ်တွင်း ရှိ မရှိ မေးသည်ကို "အဖေ မရှိပဲ မွေးလေသလော" ဟု မေးဘိသကဲ့သို့လည်းကောင်း၊ "ထမင်းစား ပြီးပြီလား" မေး သည်ကို "ထမင်းကိုမှ မှန်အောင် စားရသလော" ဟု စူးစမ်းသည့်သဘောကဲ့သို့လည်းကောင်း အဓိပ္ပါယ် အကျကောက် ၍ နာကြည်းတတ်ခြင်းကို အကျကောက်သည်ဟု စကားချုံ့၍ သုံးနှုန်းလေသည်။ အထအန ကောက်သည်ဟုလည်း ဆို ကြသည်။ (မြန်မာဘန်းစကား-လှသမိန်)
(၁) အတ္တဟိတ - မိမိ အကျိုးရှိမှုကို ပြုလုပ်ခြင်း။
(၂) ပရဟိတ - သူတစ်ပါး အကျိုးရှိမှုကို ပြုလုပ်ခြင်း။
၁၃၃၇ ခုနှစ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော အင်္ဂလိပ်-ပြင်သစ်၏အနှစ်(၁ဝဝ)စစ်ပွဲ ဖြစ်သည်။ (ဗဟုသုတဒိုင်ယာရီ-တွဲ-၂)
၁၉၆၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၇ ရက်နေ့တွင် တော်လှန်ရေးအစိုးရ ပညာရေးဌာနမှ အခြေခံပညာရေးစနစ်သစ် ဥပဒေကို ထုတ်ပြန်ကျေညာခဲ့သည်။ (ဗဟုသုတဒိုင်ယာရီ-တွဲ-၇)
(၁)ဆန္ဒာဂတိ - ချစ်သည်ဖြစ်၍ ဘက်မလိုက်သင့်သည်ကို လိုက်၍ မပြုလုပ်သင့်သည်ကို ပြုလုပ်မိခြင်း။
(၂)ဒေါသာဂတိ - စိတ်ဆိုးသည် ဖြစ်၍ ဘက်မလိုက်သင့်သည်ကို လိုက်ပြီး မပြုသင့်သည်ကို ပြုလုပ်မိခြင်း။
(၃)ဘယာဂတိ - ကြောက်ရွံ့သည် ဖြစ်၍ ဘက်မလိုက်သင့်သည်ကို လိုက်ပြီး မပြုသင့်သည်ကို ပြုလုပ်မိခြင်း။
(၄)မောဟာဂတိ - တွေဝေသည် ဖြစ်၍ ဘက်မလိုက်သင့်သည်ကို လိုက်ပြီး မပြုသင့်သည်ကို ပြုလုပ်မိခြင်း။ (စတုက္က အင်္ဂုတ္တိုရ်)
အငမ်းမရ ဖြစ်သည် (လိုချင်တပ်မက်ခြင်း ပြင်းပြသည်၊ အာသာငမ်းငမ်း ဖြစ်သည်၊ ငမ်းသည်)
အငမ်းမရ ဟူသော စကားမှာလည်း ထိုအဓိပ္ပါယ်ပင် ဖြစ်လေသည်။ "အငမ်းမရ" သည် ငမ်းခြင်းကို တားဆီးမရသည် ကိုလည်းကောင်း၊ ငမ်းသော်လည်း မရပဲ ရှိသည်ကိုလည်းကောင်း ဆိုသကဲ့သို့ ရှိသည်။ သို့ပင် ဖြစ်စေကာမူ အငန်းမရ ဟူသော စကား ရှိပေသေးသည်။ ထိုစကားမှာ အလုပ်တာဝန်ကို ဝေပုံကျ လုပ်ကြသူတစု၌ အကြောင်းတခုခုကြောင့် ​တယောက်ယောက်သည် မိမိအတွက် ဝေပုံကျ တာငန်း၊ အလုပ်အငန်း မရရှိသောအခါ မိမိဝင်ငွေ ရရှိရန် အခွင့်အရေး လစ်ဟင်း ဆုံးရှုံးရခြင်း ဖြစ်၍ မကျေမချမ်း ဖြစ်ရသည်။ ထိုသို့ လစ်ဟင်း ကြွင်းကျန်၍ ဖက်ပဲ့နေခြင်း၊ တာဝန်လစ်လပ် လျက် ရှိခြင်း၊ မစေ့မငု ကြွင်းကျန်နေခဲ့ခြင်းတို့ကို အငန်းမရ ဖြစ်သည်ဟူ၍လည်း ဆိုသည်။ (မြန်မာဘန်းစကား-လှသ မိန်)
အငြိမ့်ရူးမလေး (ရေး-မောင်မောင်လေး၊ ဆို-မာသီ)
စင်မြင့်များထက်မှာ...မိုးဆမ်းပန်းပမာ လန်းလျက်ပါ အစဉ်သာယဉ်ကာ အသွင်ထူးစွာ လှလှပပကလေးပါ... ရှင်းကြော့ကြော့ တေးဖွဲ့ကာ နီထွေးထွေးသွေးရောင်ယှက်ဖြာ...နှုတ်အာဆို ချိုလို့သာ ဆိုကတဲ့အငြိမ့်မင်းသမီး သူတို့ရဲ့ ဟန်လဲပါ...အတုယူကာ...ဆိုဖွဲ့လို့ ကလိုက်ဦးမှာ ရှင့်...။
ဟေ့-မာသီ-ကရေးရာ အငြိမ့်ရူးမလေး ဘွဲ့ပေးကာ အများတကာ လှောင်လို့သာ ပြုံးကြလေပြီကွာ...မကြွားစရာပ အများတကာက ဟားလာသမျှ အမြဲသာ ရင်ဆိုင်ကာ အတင်းအဖျင်းဆိုတာ ဆိုစမြဲပါ...သူတို့မောကြရင် ရပ်ကြတာ... ကျမဝါသနာလမ်းကလေးပါ...ထင်ပေါ် ရင် စင်တော်ကောက်မှာ...။
ပုထုဇနော ဥမ္မတ္တကော မြတ်ဘုရား ဟောကြားခဲ့လေတာမို့...ဝါသနာစေရာ သွေမကွာဘဲ (လိုက်နာကြတာ)၂ ရူးတယ် လို့ ဆိုဆိုလာ အောင်မြင်သော ဟိုတနေ့မှာ ထူးပါတယ်လို့ ဆိုဦးမှာ...။
ခုတော့ တယောက်ထဲ ပျော်ရွှင်စရာ စောင်တွေရှိသမျှသာ ကန့်လန့်ကာ အထည်တွေ ရှိသမျှသာ ဝတ်စားကာ မျက်စလေးပေးပေးလို့ အချိုးကျကျသာ မိဘများ မရှိခိုက်ပါ...ကွေးကွေးအောင် ဆိုလို့ ကမှာ ပျော်ရွှင်ဘွယ်ရာ ကျမရဲ့ ဝါသနာ...။
(၁) အာဟာရဟတ္ထက - မထနိုင်သဖြင့် လက်ကို ဆွဲလှဲ့ပါဦးဟု စားသောသူ တစ်ယောက်။
(၂) အလံသာဋက - ကျွတ်သွားသည့် ပုဆိုးကို ပြန်၍ မကောက်နိုင်အောင် စားသောသူ တစ်ယောက်။
(၃) တတ္ထဝဋ္ဋက - မထနိုင်သဖြင့် တပြောင်းတပြန် လှိမ့်၍ နေရအောင် စားသောသူ တစ်ယောက်။
(၄) ကာကမာသက - ခံတွင်းထဲသို့ ကျီးနှိုက်၍ စားနိုင်အောင် စားသောသူ တစ်ယောက်။
(၅) ဘုတ္တဝမိဒက - စားပြီးသမျှ အံထွက်အောင် စားသောသူ တစ်ယောက်။ (ဓမ္မပဒ)
၁၈ ရာစုခေတ်အလယ်တွင် ပြင်သစ်လူမျိုး ရီးယားမား ဆိုသူသည် အသက် ၇ဝ အရွယ်ရောက်မှ အ​စာချေဖျက်ခြင်းကို သုတေသနပြုခဲ့သည်။ ၄င်းသည် အစာအိမ်အရည်ခေါ် (Gastric Juice)ကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။
အစင်းသိသည် (အရင်းမြစ် သေချာသိသည်)
ကြောင်၊ ခွေး၊ နွား စသော သတ္တဝါတို့ကို မွေးကျွေးထားသောအခါ အခြား သတ္တဝါများနှင့် ရောနှောနေသော်လည်း မိမိ တို့ အိမ်မွေး တိရစ္ဆာန်၏ အသွေးအမွေး၊ အကွက်အစင်းတို့ကို သိရှိမှတ်ထားသဖြင့် မိမိတို့၏ တိရစ္ဆာန် ဖြစ်ကြောင်းကို အလွယ်နှင့် ခွဲစစ်နိုင်လေသည်။ ထိုအကြောင်းကို စွဲ၍ အစင်းသိသည်၊ အစင်းသိပြီးပြီ စသည်ဖြင့် တင်စား၍ ဆိုကြ သည်။ အချို့က အဖြောင့်သိသည် ဟူ၍ အဖြောင့်အစင်း၊ စင်းလုံးချော ဟူသော ယင်းအနက်ကို ယူကြသည်။ (မြန်မာ ဘန်းစကား-လှသမိန်)
(၁)ဘုရားရှင်တို့၏ဘုရားအရာသည် မကြံစည်အပ်သောအရာ ဖြစ်၏။
(၂)ဈာန်ရသောပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ ဈာန်အရာသည် မကြံစည်အပ်သောအရာ ဖြစ်၏။
(၃)ကံ၏အကျိုးပေးခြင်းသည် မကြံစည်အပ်သောအရာ ဖြစ်၏။
(၄)ဤကမ္ဘာလောကကြီးသည် အဘယ်သူ ဖန်တီးထားသနည်း၊ သတ္တဝါတို့သည် အဘယ်သူ ဖန်တီးထားသနည်း၊ ရေ မြေ တော တောင် သမုဒ္ဒရာသည် အဘယ်သူ ဖန်တီးထားသနည်း (ဟု) ကြံစည်စိတ်ကူး၍ နေသော သူသည် စိတ်ပင် ပန်းရုံ ရူးသွပ်ရုံသာ ရှိတော့အံ့နည်း။ (စတုက္က အင်္ဂုတ္တိုရ်၊ ၃-အပဏ္ဏကဝဂ်၊ ၇-အစိန္တေယျသုတ်)
(၁) မိုဃ်း - မိုဃ်းသည် ရွာမလိုလိုနှင့် မရွာဘဲ ဖြစ်တတ်၏။ မရွာဘူးလိုလိုနှင့်လည်း ရွာတတ်၏။ သူ့သဘောကို မည်သူမှ အစိုးမရ။
(၂) နွားသိုး - နွားသိုးသည် စိတ်ကောင်း ရှိသည် မရှိသည်ဟု မသိရ။ သူဝှေ့လိုသည့်အခါ သခင်ကိုပင် ပြန်ဝှေ့၏။ သူ့ သဘောကို အစိုးမရ။
အဆာ ကျယ်သည် (ဇီဇာချဲ့သည်-အလိုဆန္ဒ ကျယ်ပြန့်သည်၊ လိုအင်ကြွယ်သည်)
ထိုစကားမှာ ပူဆာတောင့်တမှု ကျယ်ပြန့် များပြားခြင်းကို တင်စား၍ သုံးနှုန်းသည်။ အလိုမပြည့်နိုင်ခြင်း၊ (ချေးများ ခြင်း) အလဲအလှယ် အတောမသတ် အလိုရှိခြင်း၊ လိုအင်ဆန္ဒ များပြား ကျယ်ပြန့်ခြင်း၊ ကျေနပ် နှစ်သိမ့်နိုင်ခဲ့ခြင်း၊ အဆောင်အယောင် ချဲ့ခြင်း စသော အကျယ်ချဲ့မှုများကို တင်စား၍ သုံးသည်။ (မြန်မာဘန်းစကား-လှသမိန်)
သင်္ကြန် ဖြစ်ပေါ်လာပုံမှာ ပရမီသွာ(သျှိုဗား)နတ်မင်း၏သား အာသီ မည်သော ဗြဟ္မာနတ်မင်းနှင့်သိကြားမင်းတို့သည် ဗေဒင်ဆိုင်ရာ အချက်တစ်ခု၌ အငြင်းအခုံဖြစ်ကြရာ လူ့ပြည်သို့ဆင်းပြီး ကဝါလမိုင်းပညာရှိထံ ရှုံးသူဦးခေါင်းဖြတ်ခံရ စတမ်း ကတိထား၍ သွားရောက်မေးမြန်းကြ၏။ ထိုအငြင်းအခုံပွဲတွင် သိကြားမင်းက နိုင်လေရာ သိကြားမင်းက ဗြဟ္မာ၏ဦးခေါင်းကို ဖြတ်၍ နတ်သမီး(၇)ဖော်တို့အား အလှည့်ကျ တစ်နှစ်တစ်ကြိမ် ပွေ့ပိုက်စောင့်ထိန်းစေခဲ့၏။ ကျန်သော ဗြဟ္မာ၏ကိုယ်တွင် ပိင်္ဂလမည်သော ဆင်ဦးခေါင်းကို တပ်ဆင်ထားသည်။ ထိုဗြဟ္မာ့ကိုယ်နှင့်ဆင်ဦးခေါင်းရှိ သော နတ်ကို မဟာပိန္နဲနတ်ဟုခေါ်ကြသည်။ သင်္ကြန်ပွဲမှာ ပူလောင်သော ဗြဟ္မာ၏ဦးခေါင်းကို တာဝန်ယူ၍ ပွေ့ပိုက် ထားရသည့်နတ်သမီးများ တစ်နှစ်တစ်ခါ လက်ပြောင်းယူချိန်တွင် ဗြဟ္မာခေါင်းအေးဆေးရန် ရေလောင်းရခြင်း၏ အထိမ်းအမှတ် ဖြစ်၏။ (ဗဟုသုတဒိုင်ယာရီ-တွဲ-၂)
ကုလသမဂ္ဂရှိ အထွေထွေညီလာခံသည် ကုလသမဂ္ဂတွင် အရေးပါ အရာရောက်ဆုံးသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်လေ သည်။ ၄င်းအထွေထွေ ညီလာခံတွင် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှ ကိုယ်စားလှယ်ငါးဦးကျစီ ပါဝင်ကြသည်။ အထွေ ထွေညီလာခံ၏ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ရပ်ကို ချရန် အများဆန္ဒသုံးပုံနှစ်ပုံ ရရှိရမည် ဖြစ်လေသည်။ အထွေထွေညီလာခံကို နှစ်ပတ်လည်ညီလာခံနှင့်လိုအပ်၍ ကျင်းပသော အရေးပေါ်ညီလာခံ ဟူ၍ နှစ်ပိုင်း ခွဲခြားထားသည်။ အထွေထွေညီ လာခံတွင် ဦးစီးနာယကပြုရန် အသင်းသားများ၏ဆန္ဒအရ ညီလာခံ၏ဥက္ကဋ္ဌနှင့်ဒု-ဒုက္ကဋ္ဌတို့ကို ရွေးချယ်တင်မြှောက် ကြရ၏။ (ဗဟုသုတဒိုင်ယာရီ-တွဲ-၇)
(၁)ဆန္ဒာဓိပတိ - အလိုဆန္ဒ အကြီးအမှူး။
(၂)ဝီရိယာဓိပတိ - ဝီရိယ အကြီးအမှူး။
(၃)စိတ္တာဓိပတိ - စိတ် အကြီးအမှူး။
(၄)ဝီမံသာဓိပတိ - ပညာ အကြီးအမှူး။
အနာကြီးရောဂါပြခန်းတွင် အဖြူကွက်၊ အနီကွက်ပေါ်ခြင်း၊ ထုံခြင်း၊ ခြေလက်လေးလံခြင်း စသော လက္ခဏာများ သည် အနာကြီးရောဂါ ဖြစ်ပွားနိုင်သဖြင့် နီးရာကျန်းမာရေးဌာနတွင် စမ်းသပ်ရန် နှိုးဆော်ထားလေသည်။ ရောဂါဖြစ်စ ကုသလျှင် ပျောက်ကင်းနိုင်ကြောင်းကိုလည်း သတိပေးထားသည်။ ဆက်လက်၍ အနာကြီးရောဂါသည်၊ ကူးစက်နိုင် သောအခြေအနေရှိသူ ရောဂါရှင်နှင့်ကြာရှည်စွာ အတူနေထိုင်မှသာလျှင် ကူးစက်ဖြစ်ပွားနိုင်လေသည်။ အကယ်၍ ရောဂါရှင်နှင့်အိမ်သူအိမ်သားများ စားသောက်မှုမှအစ သီးခြားခွဲ၍ နေထိုင်မည်ဆိုပါက မကူးစက်နိုင်ပေ။ အနာကြီး ရောဂါကို ယခု ဆီဗာ(၁၉ဝ၆)ဆေးပြား၊ ဒီဒီအက်ဆေးပြား စသည်တို့ဖြင့် ကုသပြီး ယခင်က ကလောဆီဆေးကို အသုံး ပြုသည်။ ၄င်းမှာ ​လိမ်းဆေး ဖြစ်သည်။ အနာကြီးရောဂါ ဖြစ်ပွားသဖြင့် ကိုယ်အင်္ဂါချို့တဲ့လျှင် ခွဲစိတ်ကုသပေးပုံ၊ ကျောင်းများတွင် ၄င်းရောဂါ ရှိ မရှိ စမ်းသပ်စစ်ဆေးပုံတို့ကိုလည်း ပြသထားလေသည်။ (ဗဟုသုတဒိုင်ယာရီ-တွဲ-၇)
အနိယတ ရဟန်းသိက္ခာပုဒ် (၂)ပါး
(၁) ရဟန်းသည် မိန်းမနှင့် အကာအကွယ် ရှိသော အများမမြင်သော နေရာ၌ နှစ်ယောက်တည်း အတူ မနေရ။
(၂) ရဟန်းသည် မိန်းမနှင့် အကာအကွယ် မရှိသော အများ မကြားရသော နေရာ၌ အတူ မနေရ။ (ဝိ၊ ၂၂၇ မှ)
(၁)ဗုဒ္ဓဂုဏော အနန္တော - မြတ်စွာဘုရား၏ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်သည် နှိုင်းစရာ မရှိ။
(၂)ဓမ္မဂုဏော အနန္တော - တရားတော်၏ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်သည် နှိုင်းစရာ မရှိ။
(၃)သံဃဂုဏော အနန္တော - သံဃာတော်၏ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်သည် နှိုင်းစရာ မရှိ။
(၄)မာတာပိတုဂုဏော ​အနန္တော - မိဘ၏ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်သည် နှိုင်းစရာ မရှိ။
(၅)အာစရိယဂုဏော အနန္တော - ဆရာသမား၏ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်သည် နှိုင်းစရာ မရှိ။
၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၂၈ ရက်နေ့တွင် တော်လှန်ရေးအစိုးရသည် အနုပညာရှင်များအား အမတော်ကြေး ထုတ်ချေး ရန် ဥပဒေတစ်ရပ် ပြဋ္ဌာန်းပေးမည်ဟု ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ (ဗဟုသုတဒိုင်ယာရီ-တွဲ-၇)
ကမ္ဘာတွင် ပထမဆုံး အနုမြူဗုံးပြုလုပ်ရာ၌ ပါဝင်ခဲ့သူမှာ ပါမောက္ခကလော့စ်ဖတ်ချ် ဖြစ်သည်။ ၄င်းသည် ဗြိတိသျှ၏ လျှို့ဝှက်ထားသော အနုမြူဗုံးလုပ်နည်းကို ရုရှားထံ ရောင်းစားသည့်အတွက် ဗြိတိသျှအစိုးရ၏ထောင်ဒဏ်အပြစ်ပေး ခြင်းကို ခံခဲ့ရသည်။ (ဗဟုသုတဒိုင်ယာရီ-တွဲ-၁)
၁၉၅၃ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂ဝ ရက်နေ့က အမေရိကန်၏အနုမြူဗုံးလျှို့ဝှက်ချက်ကို ရုရှားသိအောင် လုပ်မိသော အမေရိကန် ပြည်သား(ရိုဇင်ဘတ်)တို့ဇနီးမောင်နှံအား လူသတ်ဓာတ်ကုလားထိုင်နှင့်ကွပ်မျက်ခဲ့သည်။ (ဗဟုသုတဒိုင်ယာရီ-တွဲ-၂)
အနုမြူဆိုသော ဝေါဟာရကို ဘီစီ ၅ဝဝ က (ဒီမိုကရေတက်)ဆိုသူက စတင်ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ (ဗဟုသုတဒိုင် ယာရီ-တွဲ-၇)
အမေရိကန်အနုမြူဗုံးကြောင့် ဟီရိုရှီးမားတွင် လူ (၇၈၁၅ဝ)သေဆုံးပြီး ၃၇၄၂၅ ယောက် ဒဏ်ရာရခဲ့သည်။ ၁၃၉၈၃ ယောက် ပျောက်ဆုံးခဲ့သည်။ နာဂါဆာကီတွင်မူ လူ ၃၉​​ဝဝဝ ယောက် သေခဲ့သည်။ (ဗဟုသုတဒိုင်ယာရီ-တွဲ-၇)
အပူချိန်တိုင်း ကိရိယာကို ထွင်ခဲ့သူ
(၁)ယုတ်ညံ့သူကို ပေါင်းလျှင် မိမိမှာ ယုတ်ညံ့သူ ဖြစ်ရ၏။
(၂)တန်းတူသူကို ပေါင်းလျှင် မိမိမှာ မဆုတ်ယုတ်ရ၏။
(၃)အဆင့်အတန်းမြင့်သူကို ​ပေါင်းလျှင် လျင်မြန်စွာ မြင့်မားတိုးတက်ရ၏။ (အင်္ဂုတ္တိုရ်၊ ၁-သေဝိတဗ္ဗသုတ်)။
အပိုင်းအခြား အဆီးအတား မရှိသော တရား(၅)ပါး
ပိုင်းခြားသတ်မှတ်၍မရ၊ အဆုံးမရှိ ပြုတတ် ဖြစ်တတ်သော သဘော(၅)ပါး ဖြစ်သည်။ လင်္ကာဖြင့် ဖော်ပြလိုက်သည်။ သေသောက်တဲနှင့်၊ မလွဲသဘင်၊ သောက်ရေစင်နှင့်၊ ထို့ပြင်တသီး၊ မြစ်ခရီးနှင့်၊ အပြီးတူစွာ၊ မိန်းမမှာတည့်၊ ဝေလာ ကာလ၊ မရှိကြဘူး(မြန်မာမှု အဘိဓာန်-မောင်ဇနိယ)
(၁)ငရဲ - ချမ်းသာမှု အလျဉ်းမရှိသောအရပ်။
(၂)တိရစ္ဆာန် - မဂ်ဖိုလ်ကို ဖီလာပြု၍ မိုးကို ကျောပေးသော သတ္တဝါ။
(၃)ပြိတ္တာ - ကိုယ်လက်အင်္ဂါ မမျှတသော သတ္တဝါ။
(၄)အသုရကာယ် - မရဲရင့်သော ပြိတ္တာ သတ္တဝါတစ်မျိုး။
အပ္ပမညာ စေတသိက် (၂)ပါး
(၁) ကရုဏာ - ဆင်းရဲသူများကို မြင်က သနားခြင်း။
(၂) မုဒိတာ - ချမ်းသာမှု ရသူများကို မြင်ပါက ဝမ်းမြောက်ခြင်း။
(၁) ယုတ်ညံ့သူကို ပေါင်းလျှင် မိမိမှာ ယုတ်ညံ့သူ ဖြစ်ရ၏။
(၂) တန်းတူသူကို ပေါင်းလျှင် မိမိမှာ မဆုတ်ယုတ်ရ၏။
(၃) အဆင့်အတန်း မြင့်သူကို ပေါင်းလျှင် လျင်မြန်စွာ မြင့်မား တိုးတက်ရ၏။ (အင်္ဂုတ္တိုရ် ၁-သေဝိတဗ္ဗသုတ်-၁၂၃)
(၂) ၄င်းမင်း၏သား - ဥဒယဘဒ္ဒမင်း။
(၃) ၄င်းမင်း၏သား - အနုရုဒ္ဓါမင်း။
(၄) ၄င်းမင်း၏သား - မုဏ္ဍမင်း။
(၅) ၄င်းမင်း၏သား - နာဂဒါသမင်း။ (၄င်းမင်း၏ လက်ထက်၌ အဆုံးသတ်သည်။)
(၁)ဗဟုနေတ္တာရ-နည်းညွှန်လမ်းပြ အကြီးအမှူးလုပ်လိုသူ ပေါများခြင်း။
(၂)သဗ္ဗပဏ္ဍိတမာနီ-မိမိကိုယ်ကို ပညာရှိဟု ဘဝင်မြင့်သူ များခြင်း။
(၃)ဗဟုမဟိစ္ဆာ-ရာထူး မက်မောသူ များခြင်း။
(၁) ဣဒ္ဓိဝိဓအဘိဉာဏ် - တန်ခိုးအမျိုးမျိုး ဖန်ဆင်းနိုင်သော ဉာဏ်။
(၂) ဒိဗ္ဗသောတအဘိဉာဏ် - နတ်တို့ နားကဲ့သို့ ကြားနိုင်သော ဉာဏ်။
(၃) ပရစိတ္တဝိဇာနနအဘိဉာဏ် - သူတစ်ပါးစိတ်ကို ပိုင်းခြား၍ သိ​နိုင်သော ဉာဏ်။
(၄) ပုဗေနိဝါသအဘိဉာဏ် - ​ရှေးရှေးသောဘဝက ဖြစ်စဉ်ကို သိနိုင်သော ဉာဏ်။
(၅) ဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိဉာဏ် - နတ်တို့၏ မျက်စိကဲ့သို့ မြင်နိုင်သော ဉာဏ်။ (သင်္ဂြိုဟ်)
အမေရိကန်ရှိ ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံးတံတားတစ်ခု (ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံးတံတားကိုလည်း ရှု)
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အရှည်ဆုံးတံတားများအနက် အမေရိကန်ပြည် ဆန်ဖရန်စစ္စကို အုက္ကလန်တံတားသည် တစ်ခုအပါအဝင် ဖြစ်သည်။ (ဗဟုသုတဒိုင်ယာရီ-တွဲ-၇)
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ကြေးစား​ဘောလုံးအသင်းကို ၁၉၂ဝ ပြည့်နှစ်က စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ (ဗဟုသုတဒိုင် ယာရီ-တွဲ-၇)
အမေရိကန်ပြညည်ထောင်စုတွင် အပျော်တမ်းတူရိယာသမား သန်း ၄ဝ နီးပါးခန့်ရှိပြီး ၄င်းတို့အအနက် လေးပုံတစ်ပုံ မှာ ဂီတာတီးကြသည်ဟုဆိုသည်။ ၁၉၆၅ ခုနှစ်က အမေရိကန်တစ်ပြည်လုံးတွင် ဂီတာအလုံးပေါင်း တစ်သန်းခွဲရောင်း ချရသည်ဆိုသည်။ (ဗဟုသုတဒိုင်ယာရီ-တွဲ-၇)
အမေရိကန်လေကြောင်း (Pan American)
ပင်(န်)အမေရိကန်လေကြောင်းသည် ၁၉၂၉ ခုနှစ်တွင် အင်္ဂလန်နှင့်အိန္ဒိယသို့လည်းကောင်း၊ ၁၉၃ဝ ပြည့်တွင် နယ်သာ လန်မှ နယ်သာလန်အရှေ့အိန္ဒိယသို့လည်းကောင်း၊ စတင်ပျံသန်းခဲ့ပြီး ၁၉၃၈ ခုနှစ်အရောက်တွင် ကမ္ဘာ့တစ်ဝက်ခရီး သို့ ပျံသန်းနေပြီ ဖြစ်သည်။ (ဗဟုသုတဒိုင်ယာရီ-တွဲ-၇)
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် လူမှုဖူလှုံရေးဥပဒေကို ၁၉၃၅ ခုနှစ်က ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းခြင်း၏ရည်ရွယ် ချက်မှာ အလုပ်လက်မဲ့များ၊ အသက်အရွယ် အိုမင်းသူများ၊ မှီခိုသူခလေးသူငယ်များ၊ မျက်မမြင်ဒုက္ခိတများအတွက် လိုအပ်သလို ကူညီစောင့်ရှောက်ရန် ဖြစ်သည်။ (ဗဟုသုတဒိုင်ယာရီ-တွဲ-၇)
အမေရိကန်ပြည်တွင် ပထမဆုံးလုပ်သားများ၏အနည်းဆုံးလုပ်ခဥပဒေ (Mininum Wage Law) ကို ၁၉၁၂ ခုနှစ်က ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။ (ဗဟုသုတဒိုင်ယာရီ-တွဲ-၇)
အမေရိကန်ပြည်သည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ကျောက်မီးသွေးများအနက် ၃၅ ရာခိုင်နှုန်း ထွက်လေသည်။ (ဗဟုသုတဒိုင်ယာရီ- တွဲ-၇)
အမေရိကန်ပြည်​ထောင်စုသည် ဒေါ်လာအသုံးပြုသော နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၄င်းဒေါ်လာအကြွေများကို အမေရိကန် ပြည် ဖိလဒယ်လ်ဖီရာနှင့်ဒင်ဗီရှိဖက်ဒရယ်သွန်း ဒင်္ဂါးစက်ရုံတွင် ပြုလုပ်သည်။ ဒေါ်လာပြားများ ပြုလုပ်ပုံမှာ ပထမ (Alloy)ခေါ် ရောစပ်သတ္တု ပြုလုပ်သည်။ ၄င်းမှာ အထူပြုလုပ်ထား​သည့်သတ္တု ဖြစ်သည်။ ထိုနောက် လျှပ်စစ်မီးဖိုဖြင့် ၄င်းသတ္တုကို ကျိုသည်။ ပြီးလျှင် ခပ်ပါးပါးအချောင်းကလေးများ ပြုလုပ်သည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် ၄င်းအချောင်းများကို ဒေါ်လာပြားအထူအတိုင်းရှိအောင် အစရှည်များ ပြုလုပ်သည်။ ပြုလုပ်ပြီးသား အစရှည်များကို (Punch Machine) ဖောက်စက်သို့ပို့ကာ ပိုက်ဆံပုံစံ အကြမ်းထည်အဖြစ် ဖြတ်တောက်သည်။ ထိုပိုက်ဆံပုံစံကြမ်းများကို အနားများထူရန်၊ ရေတွက်ရာ၌ လွယ်ကူစေရန်၊ အကိုင်အတွယ်ခံစေရန် အချောသတ်ပြုလုပ်မွမ်းမံပြီး ပိုက်ဆံပေါ်တွင် တံဆိပ် ရိုက်နှိပ် လေသည်။ ဤတွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ(အကြွေ)များ ဖြစ်လာပေတော့သည်။
၁။ ၁ ဒေါ်လာ
၂။ ၂ ဒေါ်လာ
၃။ ၅ ဒေါ်လာ
၄။ ​၁ဝ ဒေါ်လာ
၅။ ၂ဝ ဒေါ်လာ
၆။ ၅ဝ ဒေါ်လာ
၇။ ၁ဝဝ ဒေါ်လာ
၈။ ၅ဝဝ ဒေါ်လာ
၉။ ၁ဝဝဝ ဒေါ်လာ
၁ဝ။ ၅ဝဝဝ ဒေါ်လာ
၁၁။ ၁ဝဝဝဝ ဒေါ်လာ
၁၂။ ၁ဝဝဝဝဝ ဒေါ်လာ
၄င်းတို့မှာ တစ်ချပ်တည်းနှင့်ဖော်ပြပါ တန်ဖိုးရှိဒေါ်လာစက္ကူများ ဖြစ်သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် စက္ကူ ဒေါ်လာများကို တစ်ဒေါ်လာမှဒေါ်လာတစ်သိန်းတန်အထိ ထုတ်ဝေလေသည်။ (ဗဟုသုတဒိုင်ယာရီ-တွဲ-၇)
အမေရိကန်ပြည်တွင် ယခုလက်ရှိ သုံးစွဲနေသော [Cents]ဒေါ်လာများကို ၁၈၅၆ ခုနှစ်က ပထမဆုံး သွန်းလုပ်ခဲ့သည်။ ၄င်းဆင့်ပြားပေါ်တွင် လင်းယုန်တစ်ကောင် ပျံသန်းနေပုံကို တံဆိပ်အဖြစ် ခပ်နှိပ်ထားပြီး အရောင်မှာ သတ္တုအဖြူ ရောင် ဖြစ်သည်။
အမေရိကန်မှ တိုင်းခြားသို့ ငွေပို့လိုလျှင်
အမေရိကန်မှ တိုင်းခြားသို့ ငွေပို့လိုပါမူ စာတိုက်သို့ သွား၍ စာတိုက်တွင် (International Money Order)အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ ငွေပို့လွှာကို တောင်းခံ၍ ပို့နိုင်သည်။ စာတိုက်မှပို့မည့် တိုင်းပြည်မှငွေသည် အမေရိကန်ဒေါ်လာငွေအရ မည်မျှ တန်ဖိုးရှိသည်ကို ရှင်းပြသည်။ သို့မှသာ မပို့လိုလျှင် အမေရိကန်[Express]မှ ပို့နိုင်ပေသည်။ (ဗဟုသုတဒိုင်ယာရီ-တွဲ- ၇)
ဂျွန်ဖစ်(ဇ်)ဂျရဲလ်(ဒ)ကနေနဒီသည် အမေရိကန်ပြည်၏ ၁၅ ကြိမ်မြောက် သမ္မတ ဖြစ်သည်။ တက္ကဆပ်ပြည်နယ်အုပ် ချုပ်ရေးမှူး အိုကွန်နယ်လီနှင့်အတူ ဒါးလက်(စ်)မြို့တွင်း လှည့်လည်သွားလာနေစဉ် လုပ်ကြံခံရသည်။ သေနတ်အပစ် ခံရပြီး တစ်နာရီခွဲခန့်အကြာ ၄င်းပြည်နယ် ပါကရင်ဆေးရုံတွင် ကွယ်လွန်သည်။ ကွယ်လွန်သောနေ့မှာ ၁၉၆၃ ခု၊ နိုဝင် ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့ ဖြစ်၍ ဖခင်မှာ ဂျိုးဇက်ပီကနေဒီ ဖြစ်သည်။ ၁၉၁၇ ခု၊ မေလ ၂၉ ရက်နေ့့ ဘော်စကုန်မြို့အနီးတွင် ဖွားမြင်သည်။ သားချင်း ၉ ဦးအနက် ဒုတိယသား ဖြစ်၍ နိုင်ငံရေးပညာကို အထူးလိုက်စားခဲ့သည်။ ၁၉၄၁ ခုက ရေ တပ်တွင် အရာရှိငယ်အဖြစ် အမှုထမ်းခဲ့သည်။ ၁၉၄၃ ခုနှစ်တွင် ၄င်းအုပ်ချုပ်သော ပီတီ ၁ဝ၉ သင်္ဘောသည် ပစိဖိတ် အတွင်း ဂျပန်ဖျက်သင်္ဘောကြောင့် ထက်ပိုင်းပြတ်ခဲ့သော်လည်း အသက်မသေခဲ့ပေ။ သတင်းထောက်လည်း လုပ်ခဲ့ ဖူးသည်။ စစ်ပွဲတစ်ခုတွင် ကျဆုံးခဲ့သော ၄င်း၏အစ်ကို ဂျိုးဇက်ကြောင့် ကနေဒီသည် နိုင်ငံရေးနယ်ထဲသို့ ခြေစုံပစ်ဝင်ခဲ့ သည်။ မက်ဆာချူးဆက်နယ်၏ ၁၁ ကြိမ်မြောက် အောက်လွှတ်တော်အမတ်အဖြစ် အရွေးခံရသည်။ ထိုစဉ်က အ သက် ၂၉ နှစ်သာ ရှိသေး၏။ ၄င်းရေးသော(ခေါင်းဆောင်နှင့်သတ္တိစာအုပ်မှာ) ၁၉၅၆ ခုနှစ်တွင် အကောင်းဆုံးအထု ပ္ပတ္တိစာအုပ်အဖြစ် ပူလစ်ဇာဆု ရရှိခဲ့သည်။ ၄င်းနှစ်တွင် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမှ ဒု-သမ္မတလောင်း ရွေးရာ ရှုံးခဲ့သည်။ ၁၉၆၁ ခု၊ ဇန်နဝါရီ ၂ဝ ရက်တွင် အမေရိကန်ပြည်၏သမ္မတအဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း ခံရသည်။ (ဗဟုသုတ ဒိုင်ယာရီ-တွဲ-၁)
၁၉၅၂ ခုနှစ်၊ မေလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် အမေရိကန်ပြည်၌ အစောဆုံး ဒင်္ဂါးစက်ရုံကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ (ဗဟုသုတဒိုင် ယာရီ-တွဲ-၇)
၁၉၆၃ ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂ဝ ရက်နေ့အထိ တောင်ဗီယက်နမ်တွင် အမေရိကန်တို့က လေယာဉ်ပျံဖြင့် အဆိပ်ရည် များ ပက်ဖျန်းချမှုကြောင့် ဘင်ထရီနှင့်မိုင်သိုနယ်များတွင် လူပေါင်း (၅ဝဝဝ)ကျော်မှာ အဆိပ်ရည်ဒဏ်ကို ခံစားခဲ့ရ လေသည်။ ထိုအဆိပ်သင့်သူများအနက် ဘင်ထရီနယ် သွံဒီယမ်ကျေးရွာတစ်ရွာထဲပင်လျှင် လူပေါင်း(၁၇ဝဝ) ရှိနေပြီး အများဆုံး ခံရသူများမှာ ကလေးသူငယ်များ ဖြစ်ကြသည်။ (ဗဟုသုတဒိုင်ယာရီ-တွဲ-၂)
အမြင့်ပေ (၃ဝဝဝဝ)၌နေသူ တစ်ယောက်သည် လေရှူသောကိရိယာမပါလျှင် (၂)မိနစ်ခွဲတွင် သတိလစ်ပြီး (၁၅)မိနစ် တွင် သေမည်ဖြစ်သည်။ (ဗဟုသုတဒိုင်ယာရီ-တွဲ-၂)
ဆိုဗီယက်တွင် ရှိသည့်ဆရာဝန်များအနက် ၇ဝ-ရာခိုင်နှုန်းမှာ အမျိုးသမီးများ ဖြစ်ကြသည်။ (ဗဟုသုတဒိုင်ယာရီ-တွဲ- ၇)
၁၉၅၂ ခုနှစ်က လန်ဒန်တွင် (ဘာဘရာ)ဆိုသူ အမျိုးသမီးလက်ဝှေ့သမား ပေါ်ခဲ့၏။ (ဗဟုသုတဒိုင်ယာရီ-တွဲ-၂)
မြန်မာနိုင်ငံကို နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်များ သိမ်းပိုက်််ပြီးနောက် ပထမဆုံး ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော စာကြည့်တိုက်မှာ ၁၈၈၃ ခုနှစ်တွင် ဆာချားလ်စ်ဘားနဒ်ဆိုသူ စတင်တည်ထောင်ခဲ့သော ဘားနဒ်ပိဋကတ်တိုက်ကြီးပင် ဖြစ်သည်။ ထိုစာကြည့် တိုက်ကြီးသို့ တရားဝန်ကြီးဂျာဒါးနှင့်ပါဠိပါမောက္ခချီလဒါဆိုသူတို့က အဖိုးတန်စာအုပ် များစွာ လှူဒါန်းခဲ့ပြီး မြန်မာ လူမျိုးထဲမှ ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဦးမျှင်နှင့်ဦးမြို့ဆိုသူတို့က ငွေကျပ် တစ်သောင်းတန် ပေမူ ပုရပိုက်မူများ လှူဒါန်းခဲ့ကြောင်း ​တွေ့ရှိရသည်။ ထိုစာကြည့်တိုက်ကို ပထမ အစိုးရပညာရေးဆင်ဒီကိတ်အဖွဲ့မှ အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ ၁၉၂၃ ခုနှစ်ကစပြီး စာ ကြည့်တိုက်အုပ်ချုပ်ရေးအအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း၍ အုပ်ချုပ်စေကာ အစိုးရက အထောက်အပံ့ပေးသည်။ ထိုနောက် ရန်ကုန်မြူနီ စီပယ်အဖွဲ့က ထောက်ပံ့ခဲ့သည်။
၁၉၁​ဝ ခုနှစ်လောက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ စာကြည့်တိုက်လုပ်ငန်း တွင်ကျယ်စ ပြုလာသည်။ ၁၉၂၅ ခုနှစ်တွင် မစ္စတာ ဖာနီဗယ်ဆိုသူက ဦးဆောင်၍ စာကြည့်တိုက် ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ဟောပြောခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံပညာပြန့်ပွားရေး အသင်းက အားပေးခြင်းတို့ကြောင့် စာကြည့်တိုက်လုပ်ငန်းများ ပိုမိုအောင်မြင်လာခဲ့သည်။
၁၉၂၅ ခုနှစ်မှ ၁၉၃၃ ခုနှစ်အထိ အစိုးရက စာကြည့်တိုက်များအတွက် နှစ်စဉ် ငွေကျပ် တစ်သောင်းမျှ ထောက်ပံ့ခဲ့ သည်။ ၁၉၃၆ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံအရပ်ရပ်၌ စာကြည့်တိုက်ပေါင်း ၁၈၆ ခု ရှိခဲ့ပြီး ၁၄၆ ခုမှာ အစိုးရ ထောက်ပံ့ငွေ ရ ရှိခဲ့သည်။
၁၉၆၅ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ မြူရုံးအဆောက်အဦအတွင်း ဖွင့်လှစ်လိုက်သော အမျိုးသားစာ ကြည့်တိုက်တွင် ပုံနှိပ်စာပေါင်း လေးသောင်းခန့်၊ လက်ရေးစာမူပေါင်း လေးထောင်ကျော်၊ သတင်းစာလေး​သောင်း တစ်ထောင်၊ မဂ္ဂဇင်းဂျာနယ် တစ်သောင်းခုနစ်ထောင်နီးပါး ရှိသည်။ (ဗဟုသုတဒိုင်ယာရီ-တွဲ-၁)
၄င်းစာကြည့်တိုက်သည် ဘားနဒ်စာကြည့်တိုက်မှ ပေါက်ဖွားခဲ့သည်။ ၁၈၈၃ ခု၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့က အောက် မြန်မာနိုင်ငံမင်းကြီး ဆာချားအက်ဒွပ်ဘားနဒ်သည် မိမိပိုင်စာအုပ်များနှင့်(ယခုဗဟိုတန်းမြင့်ကျောင်း)နေရာတွင် စာ ကြည့်တိုက်ကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ၄င်းစာကြည့်တိုက်သို့ ဦးဆုံးအဖိုးတန်စာအုပ်စာတမ်းများ လှူဒါန်းသူများမှာ တရား ဝန်ကြီးဆာဂျွန်ဂျားဒင်း ပါဠိပါမောက္ခချိလဒါ၊ ဦးဖိုးမျှင်နှင့်ဦးမြို့တို့ ဖြစ်သည်။ ဦးဖိုးမျှင်နှင့်ဦးမြို့တို့က တစ်သောင်း တန် ပေမူ ပုရပိုက်များကို ရေစက်ချ၍ လှူဒါန်းခဲ့သည်။ ၁၉၂ဝ ခုက ကင်းဝန်မင်းကြီးပိဋကတ်တော်များကို ၁၅ဝဝဝ ကျပ်ပေး၍လည်းကောင်း၊ ၁၉၂၄ ခုနှစ်တွင် ပုဂံဝန်ထောက်ဦးတင်၏ပိဋကတ်တိုက်ကို ငွေ ၅ဝဝဝ ကျပ်ပေး၍လည်း ကောင်း၊ ဝယ်ယူပြီး စာကြည့်တိုက်ကို တိုးချဲ့ခဲ့သည်။
၁၉၄ဝ ခုတွင် စာကြည့်တိုက်၌ စာအုပ်စာတမ်းပေါင်း နှစ်သောင်းနီးပါး စုဆောင်းခဲ့ပြီး ၁၉၄၂ ခုတွင် ပုံနှိပ်စာပေါင်း နှစ် သောင်းသုံးရာ့ငါးအုပ်နှင့်ပေမူ ပုရပိုက်ပေါင်း ၇၅ဝဝ ခန့် စုဆောင်းမိသည်။ စာကြည့်တိုက်ကို အစိုးရပညာရေးဆင်ဒီ ကိတ််က အုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီး အစိုးရနှင့်မြူအဖွဲ့က နှစ်စဉ်ထောက်ပံ့ကြေးများ ပေးခဲ့သည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီး ဖြစ်ပွား ချိန်တွင် စာကြည့်တိုက်မှာ စစ်ဒဏ်ကြောင့် စာအုပ်စာတမ်းများ ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ စစ်ပြီးနောက် ၁၉၄၈ ခု၊ ဩဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ၁၉၅၂ ခုတွင် စာကြည့်တိုက်ကို အစိုးရသို့ ပေးအပ်ပြီး အဆောက်အဦကို ဂျူဗ လီဟောသို့ ပြောင်းခဲ့သည်။ ၄င်းနှစ် ဇွန်လတွင် ယဉ်ကျေးမှုဌာနက အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်ဟု အမည်ပေး၍ ဖွင့်လှစ် ခဲ့သည်။ တော်လှန်ရေးအစိုးရ တက်လာပြီးနောက် စာကြည့်တိုက်ကို ပန်းဆိုးတန်းရှိ တိုက်အမှတ် ၁၆၆ သို့ ပြောင်းရွှေ့ ခဲ့ပြီး ၂ နှစ်အကြာတွင် ၁၉၆၅ ခုနှစ် ဦးပိုင်း၌ မြို့တော်ခန်းမ တတိယထပ်တွင် ပြန်လည်မွမ်းမံ ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ (ဗဟု သုတဒိုင်ယာရီ-တွဲ-၁)
၁၉၆၈ ခုနှစ်၊ အမျိုးသား စာပေဆုများကို ဆုလေးဆုစီ ၁ဝ မျိုး၊ ဆုပေါင်း ၄ဝ ချီးမြှင့်ရန် သတ်မှတ်ခဲ့သော်လည်း ၂၇ ဆု သာလျှင် ချီးမြှင့်နိုင်ခဲ့သည်။ ပြိုင်ပွဲဝင် စာအုပ်နှင့်စာမူပေါင်း ၃၇၃ ခုသာလျှင် ရှိသည်။ ဆုရ ၂၇ ဆုအနက် ၁၂ ဆုမှာ လက်ရေးမူများ ဖြစ်သည်။ ဝတ္ထုရှည်အတွက် ၄၄၊ ပြဇာတ် ၆၊ စာပဒေသာ ၃၃၊ ဘာသာပြန် ၁၇၊ ကလေးစာပေ ၅၃၊ အနုပညာနှင့်ယဉ်ကျေးမှု ၁၁၊ နိုင်ငံရေး ၈၊ သုတပဒေသာ ၄၆၊ ဝတ္ထုတိုပေါင်းချုပ် ၄၄၊ ကဗျာဆု အတွက် ၁၁၁ ပါဝင် ယှဉ်ပြိုင်ကြသည်။
၁၉၆၈ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားစာပေဆုရ စာအုပ်၊ စာမူများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။
ဒုတိယဆု။ ငွေ ၁၅ဝဝိ၊ မောင်သိင်္ခ ရေး။ လမင်းတရာ(စာမူ)။
တတိယဆု။ ငွေ ၁ဝဝဝိ၊ နာဂတောင်တန်းမောင်ကြည်ဇင်ရေး အောင်ပွဲခြိမ့်ခြိမ့် ရင်သိမ့်သိမ့်။ (စာအုပ်)
စတုတ္ထဆု။ ငွေ ၅ဝဝိ၊ သိန်းဖေမြင့်ရေး သီတာပြုံး(စာအုပ်)။
ဒုတိယဆု။ ငွေ ၁ဝဝဝိ၊ ရန်အောင်ရေး ကြုံလေ ဘုံဘွေ(စာအုပ်)။
တတိယဆု။ ငွေ ၇၅ဝိ၊ ချစ်စံရေး တညနှင့်တသက်(စာအုပ်)။
စတုတ္ထဆု။ ငွေ ၅ဝဝိ၊ မြင့်ရည်​(တမာမြေ)ရေး အစီခံ(စာမူ)။
ဒုတိယဆု။ ငွေ ၁ဝဝဝိ၊ မြေလတ်ကျော်စိန်ရေး အတ္တဆိုင်ရာဘဝကဗျာများ။ (စာမူ)
တတိယဆု။ ငွေ ၇၅ဝိ၊ ပုသိမ်မောင်စိမ်းသူရေး ပြည်သူ့အားမာန် မိုးယံသို့ချီ (စာမူ)
စတုတ္ထဆု။ ငွေ ၅ဝဝိ၊ မောင်မွန်နွယ်(ရွှေ​​ဝယ်ရေး ပန်းပေါင်းဝေဆာကဗျာများ) (စာမူ)
ဒုတိယဆု။ ငွေ ၁ဝဝဝိ၊ လင်းယုန်သစ်လွင်ရေး ယိုးဒယားမြန်မာမီးရထားလမ်း ကိုယ်တွေ့ချွေးတပ် မှတ်တမ်း(စာအုပ်)
တတိယဆု။ ငွေ ၇၅ဝိ၊ တက္ကသိုလ်ဝင်းမွန်ရေး ခေတ်သစ်ကဗျာမိတ်ဖွဲ့ (စာအုပ်)။
စတုတ္ထဆု။ ငွေ ၅ဝဝိ၊ ရန်အောင်ရေး ရန်အောင့်စာ ရန်အောင့်ဘဝ (စာအုပ်)။
ပထမဆု။ ငွေ ၁၅ဝဝိ၊ မောင်ဆုရှင်ပြန် ပင်လယ်ပြာနှင့်တံငါအို (စာမူ)။ The old man and the sea. Ernest Hemming way.
ဒုတိယဆု။ ငွေ ၁ဝဝဝိ၊ မြသိန်း(တပ်မတော်ပညာရေး)၏ နံနက်ခင်းကို စိုးမိုးသူ (စာမူ)။ Command the morning Pearl. S.Buck
တတိယဆု။ ငွေ ၇၅ဝိ၊ အောင်ခန့်ပြန် ရဲသွေးနီနီ (စာအုပ်)။
စတုတ္ထဆု။ ငွေ ၅ဝဝိ၊ ဆန်းလွင်ပြန် ဖဲသမား (စာအုပ်)။
ဒုတိယဆု​။ ငွေ ၁ဝဝဝိ၊ တက္ကသိုလ်ကြည်မာရေး အသိအလိမ္မာကဗျာများ (စာမူ)
တတိယဆုငွေ။ ငွေ ၇၅ဝိ၊ မောင်သက်ကြူရေး ရွှေသွေးမျက်ရှု စာယဉ်စု (စာမူ)
စတုတ္ထဆု။ ငွေ ၅ဝဝိ၊ သူရဇော်ရေး ရောင်နီဦး ကဗျာများ (စာမူ)
ဒုတိယဆု။ ငွေ ၁ဝဝဝိ၊ ဦးအောင်သန်းထွန်းရေး မြန်မာမင်းများ တရားစီရင်ရေး(စာအုပ်)။
တတိယဆု။ ငွေ ၇၅ဝိ၊ သပြေညို မောင်ကိုဦးရေး မြန်မာ့ရွှေဆိုင်း (စာမူ)
စတုတ္ထဆု။ ငွေ ၇၅ဝိ၊ ထားဝယ်ကျော်မင်းရေး ထားဝယ်ယဉ်ကျေးမှု အမြုတေ(စာမူ)။
ဒုတိယဆု။ ငွေ ၁ဝဝဝိ၊ သခင်လွင်ရေး မြန်မာနိုင်ငံအလုပ်သမားလှုပ်ရှားမှုသမိုင်း (စာအုပ်)။ဿ
ပထမဆု။ ငွေ ၁၅ဝ​ဝိ၊ ဦးအောင်သန်းထွန်း ခေတ်လေးခေတ်မြန်မာ့တရားဥပဒေ(စာအုပ်)။
ဒုတိယဆု။ ငွေ ၁ဝဝဝိ၊ စဝ်ထွန်းမှတ်ဝင်းရေး သုတေသနပြုစုနည်းအမျိုးမျိုး (စာမူ)။
တတိယဆု။ ငွေ ၇၅ဝိ၊ ဦးမိုးရေး မြန်မာ့စဉ်လာ နက္ခတ်တာရာ အမြင်ကြည့်သင်ခန်းစာနှင့်နေပတ်ကြန္တိဇယားချုပ် (စာ မူ)။
စတုတ္ထဆု။ ငွေ ၅ဝဝိ၊ မောင်စင်ကြယ်ရေး အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလ(စာအုပ်)။
သွေးသောက်မဂ္ဂဇင်း၊ ၁၉၆၉ ခု၊ ဒီဇင်ဘာ၊ မှတ် ၂၈၇၊ နှာ ၈။
၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့မှ ၂၁ ရက်နေ့ထိ ကမ္ဘာအေးကုန်းမြေ၌ ကျင်းပခဲ့သည်။ (ဗဟုသုတဒိုင်ယာရီ-တွဲ- ၂)
အမျိုးသားနေ့ကို ၁၉၂၁ ခုနှစ်မှစ၍ ကျင်းပခဲ့၏။ အမျိုးသားနေ့အဖြစ် ပေါ်လာခြင်းမှာ ရန်ကုန်ကောလိပ်မှ ယူနီဗာစီ တီဥ​ပဒေကို မကြိုက်၍ ကန့်ကွက်ရှုံ့ချရာမှ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၂၈၂ ခု၊ တန်ဆောင်မုန်းလဆုတ် ၁ဝ ရက်နေ့တွင် ကျောင်းသားများ သပိတ်မှောက်ခဲ့ကြသည်။ ထိုနေ့ကို ဂျီစီဘီအေအသင်းက အမျိုးသားနေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ၁၉၂ဝ ခုတွင် အမျိုးသားကျောင်းပေါင်း ၉ဝ ကျော် ကျောင်းသားပေါင်း ၁၇ဝဝဝ ရှိခဲ့သည်။ ဗဟန်းရှိ ရွှေကျင်တိုက်တွင် အမျိုးသားကောလိပ် ဖွင့်ခဲ့ရာ သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းက ရာဇဝင်နှင့်မြန်မာစာကထိက လုပ်ခဲ့သည်။ (ဗဟုသုတဒိုင်ယာ ရီ-တွဲ-၁)
၁၂၈၂ ခုနှစ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော် (၁)ရက်နေ့တွင် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ကျောင်းသားများ၏ပညာရေးတော် လှန်မှု သပိတ်ကြီး ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ ထိုစဉ်က ဗြိတိသျှဘုရင်ခံမှာ (ဆာရယ်ဂျီနယ် ကရက်ဒေါက် ဖြစ်ပြီး ပညာမင်း ကြီးမှာ ဆာမတ်​ဟန်ထား)တို့ ဖြစ်၏။ ထိုစဉ်က ယူနီဗာစီတီအက်ဥပဒေအချို့မှာ ကျောင်းသားဦးရေကို ကန့်သတ် ထားခြင်း။ ကျောင်းအိပ် ကျောင်းစား ဖြစ်ရမည်ဟုဆိုထားခြင်း။ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရသူများမှာ အင်္ဂလိပ်စာ ထူးချွန်ရ မည်၊ တက္ကသိုလ်သို့ ရောက်စ ကျောင်းသားများသည် အင်္ဂလိပ်စာကို တစ်နှစ်သင်ကြားရဦးမည်။ တက္ကသိုလ်စာမေးပွဲ တွင် နှုတ်မေးခွန်းကိုလည်း ထားရဦးမည်။ ရိုးရိုးဘီအေ ဘီအက်စီရပြီးသူများသည် မဟာဝိဇ္ဇာ၊ မဟာသိပ္ပံဘွဲ့များတွင် သင်ကြားခွင့်မရခြင်း စသော ချုပ်ချယ်မှုများကြောင့် ပညာရေးတော်လှန်မှုသပိတ်ကြီး ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ ထိုနေ့အား အမျိုးသားနေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ကြ၏။ (ဗဟုသုတဒိုင်ယာရီ-တွဲ-၂)
(ချစ်ဇောတွေ ဝေဖြာကာစည် နန်းထက်ဆီ လှမ်းတက်မည် မှန်းချက်ညီ ရွှင်လန်းစေဘို့အတည် မေတ္တာ စေတနာ ဝေသည် ပန်းပွင့်ပမာ လန်းဝင့်ကာ ဆန်းတင့်စရာ ကြည်နူးစေဘို့ရည်...)၂။
ဤကမ္ဘာမြေမဟီ လူသူအချင်းချင်း မညီ မာန်ဟုန်ငြိုးဖွဲ့ပြီ ကြင်နာခြင်း ကင်းသည် အမြင်မှန်စေမည် ကြင်နာခြင်း တရားသို့ညီ အစဉ်သာ မမှားဘို့ရည် မျှော်ရည်မှန်းဆသည်...။
လူတိုင်းပင် ကြင်ကြင်နာနာ ဘေးမသန်းစရာ အေးချမ်းစွာ တေးဆန်းပမာ သီကျူးပါလို့အတည် နိဗ္ဗာန်ခေမာသောင် ဆီ အမြဲမပျက်သည် တွဲလျက်ညီ နွှဲယှက်မည် ဆုထူးပန်သို့ညီ...။
ဘုရားရှင်၏ဂုဏ်တော်(၉)ပါးအနက်မှ အရဟံဂုဏ်တော် မည်ရခြင်းများ၊ ဘုရားရှင်သည်...
(၁)အခါခပ်သိမ်း ကိလေသာ၌ မြူမျှမထင်မငြိ ကင်းဝေးတော်မူ၏။
(၂)ကိလေသာ ဟူဟူသမျှတို့ကို အရဟတ္တမဂ်ဖြင့် သတ်ငြိမ်းတော်မူသည်။
(၃)သံသရာတွင် အဖန်တလဲလဲ လည်စေမည့်အဝိဇ္ဇာ အစရှိသော သံသရာစက်၏အတားအဆီး မှန်သမျှကို ဖျက်ဆီး ပယ်ဖျောက် တော်မူသည်။
(၄)သင်္ကန်း အစရှိသော ပစ္စည်းများကို ခံယူတော်မူထိုက်သည်။
(၅)ပုထုဇဉ်လူသားတို့အတွက် ဆိတ်ကွယ်ရာသည် မကောင်းမှုကို ဖြစ်စေ၏။ ဘုရားရှင်အတွက် ထိုသို့ မဖြစ်။ ထို့ကြောင့် အရဟံဂုဏ် ​တော်နှင့်ပြည့်စုံသည် မည်၏။
(၁) အာရကတ္တာ - ကိလေသာတို့မှ ဝေးတော်မူသောကြောင့် အရဟ မည်၏။
(၂) ပစ္စယာဒီနံ အရဟတ္တာပိ - လူသုံးပါးတို့၏ ပစ္စည်းလေးပါး စသော ပူဇော်အထူးကို ခံထိုက်သည်၏အဖြစ်ကြောင့် အရဟ မည်၏။
(၃) နတ္ထိ ရဟော ဧတဿာတိ - ဆိတ်ကွယ်ရာ အရပ်၌ မကောင်းမှု ပြုခြင်းသည် မရှိသောကြောင့် အရဟ မည်၏။
(၄) အရီနံ ဟတတ္တာပိ - ကိလေသာတည်း ဟူသော ရန်သူကို သတ်အပ်သည်၏ အဖြစ်ကြောင့် အရဟ မည်၏။
(၅) အရာနံ ဟတတ္တာပိ - သံသရာစက်တို့၏ အကန့်တို့ကို ဖျက်ဆီးအပ်သည်၏ အဖြစ်ကြောင့် အရဟ မည်၏။
၁၈၉၇ ခု၊ ဧပြီလ (၉)ရက်၊ သောကြာနေ့။ အိန္ဒိယပြည်ရှိ ဘုရင်ခံချုပ်က မြန်မာပြည်အား ပြည်နယ်တစ်ခုအဖြစ် ပြန်တမ်းတစ်ရပ် ထုတ်ပြန်ပြီးလျှင် လက်ရှိအုပ်ချုပ်လျက်ရှိ​သော မြန်မာပြည်မှ မင်းကြီးကိုလည်း လက်ထောက်ဘုရင်ခံဟု ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲစေကြရ မည်ဖြစ် ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကျေညာလိုက်လေသည်။
၁၈၉၇ ခု၊ မေလ (၁)ရက်နေ့မှ မြန်မာပြည်သည် အိန္ဒိပြည်ရှိ ဘုရင်ခံချုပ်၏လက်အောက်၌ လက်ထောက်ဘုရင်ခံ တိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်​ သော မြန်မာပြည်နယ်ဟူသော ပြည်နယ်တစ်နယ် ဖြစ်လာကာ အုပ်ချုပ်ရေးအခြေအနေမှာ တစ်မျိုးတစ်မည် ပြောင်းလဲလာခဲ့ရလေ သည်။ အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့တို့က မြန်မာနိုင်ငံကို နှိမ့်ချသော အခေါ်အဝေါ်ကို သုံးလျက် အိန္ဒိယနိုင်ငံ မြန်မာပြည်နယ်ဟု သတ်မှတ်​လျက် အိန္ဒိယဘုရင်ခံချုပ်၏လက်အောက်ခံ လက်ထောက်ဘုရင်ခံက တိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်စေခဲ့လေသည်။
ထိုနောက် မြန်မာပြည်နယ်ကို အုပ်ချုပ်ရသည့်လက်ထောက်ဘုရင်ခံအတွက် အကူအညီပေးနိုင်ရန် အတိုင်ပင်ခံ အကြံပေးအဖွဲ့ဝင် (၉) ဦး ပါဝင်သည့်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို ထားရှိရပေသည်။ သို့ရာတွင် ထိုအဖွဲ့အား မြန်မာတို့ စိတ်ဝင်စားကြဟန် မတူပေ။ စိတ်ဝင်စားနိုင် လောက်သော အကြောင်းအရာတို့သည်လည်း မရှိချေ။ မိမိနိုင်ငံအား ပြည်နယ်တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံနေရသော အချိန်တွင် အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့တို့ ပေးသော အခွင့်အရေးကို မည်သူက လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုပါမည်နည်း။ (ဗမာ့တော်လှန်ရေးအဘိဓာန်-ဦးမြင့်ဝေ)
(၁)အဂ္ဂသာဝက-မြတ်သော ရဟန္တာ၊ ရှင်သာရိပုတ္တရာနှင့်ရှင်မောဂ္ဂလာန်။
(၂)မဟာသာဝက-မဟာကဿပ စသော အသီတိ မဟာသာဝက(၈ဝ)။
(၁)ဒုက္ခသစ္စာ - ဆင်းရဲခြင်းအမှန်။ (ရုပ် နာမ် ခန္ဓာ)
(၂)သမုဒယသစ္စာ - တွယ်တာတပ်မက်ခြင်းအမှန်။ (ကာမ ကိလေသာ)
(၃)နိရောဓသစ္စာ - ဒုက္ခငြိမ်းရာအမှန်။ (နိဗ္ဗာန်)
(၄)မဂ္ဂသစ္စာ - နိဗ္ဗာန်ရောက်ရန် ကျင့်လမ်းအမှန်။ (မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး)
(၁) အဂ္ဂသာဝက - မြတ်သော ရဟန္တာ။ ရှင်သာရိပုတ္တရာနှင့်ရှင်မောဂ္ဂလာန်။
(၂) မဟာသာဝက - မဟာကဿပ စသော အသီတိ မဟာသာဝက (၈ဝ)။
(၃) ပကတိသာဝက - သာမန် ရဟန္တာများ။
(၁) ဒုက္ခသစ္စာ - ဆင်းရဲခြင်း အမှန်။ (ရုပ် နာမ် ခန္ဓာ)
(၂) သမုဒယသစ္စာ - တွယ်တာ တပ်မက်ခြင်း အမှန်။ (ကာမကိလေသာ)
(၃) နိရောဓသစ္စာ - ဒုက္ခငြိမ်းရာ အမှန်။ (နိဗ္ဗာန်)
(၄) မဂ္ဂသစ္စာ - နိဗ္ဗာန် ရောက်ရန် ကျင့်လမ်း အမှန်။ (မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး)
(၁)အာကာသာနဉ္စာယတန - ရုပ်မရှိသော ဗြဟ္မာဘုံ။ (ကောင်းကင်ပညတ်)
(၂)ဝိညာဏဉ္စာယတန - ရုပ်မရှိသော ဗြဟ္မာဘုံ။
(၃)အာကိဉ္စညာယတန - ရုပ်မရှိသော ဗြဟ္မာဘုံ။
(၄)နေဝသညာနာသညာယတန - ရုပ်မရှိသော ဗြဟ္မာဘုံ။
လိုက်ပဇစ်မြို့တွင် ရှိပြီး လူတစ်သိန်းခန့် ဆန့်သည်။ ၁၉၅ဝ ခုနှစ်က စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ဂီနီ၊ ဂါနာ၊ မော်ရိုကို၊ အင်ဒိုနီး ရှား၊ အီဂျစ်၊ ကျူးဘား၊ မြန်မာ စသော တိုင်းပြည်များမှ ကျောင်းသားများကို လက်ခံသင်ကြားပေးနေသည်။ ကျောင်း သားတစ်ဦးလျှင် ထောက်ပံ့ကြေး မတ် ၈ဝ ရရှိပြီး ထမင်းလခ မတ် ၆ဝ ပေးရ၏။ (ဗဟုသုတဒိုင်ယာရီ-တွဲ-၂)
၁၉၅၈ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်နေ့မှ နိုဝင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့အထိ ဝါရှင်တန်နယ် စီတယ်လ်မြို့ အိုလံပစ်​ ဟော်တယ်တွင် ကိုလံဘိုစီမံကိန်းအတိုင်ပင်ခံ ကော်မီတီက အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုညီလာခံ တစ်ရပ်ကို ကျင်းပခဲ့သည်။
အရှေ့တောင်အာရှတွင် ၁၉၃၄ ခုနှစ်က တည်ထောင်သော အိန္ဒိယဆိုရှယ်လစ်ပါတီသည် အစောဆုံး ဖြစ်သည်။ ဘီဟာ ပြည်နယ်တွင်မူ ဆိုရှယ်လစ်ပါတီကို ၁၉၃၁ ခုနှစ်၌ တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ဆက်လက်၍ ပန်ဂျပ်-ဘင်္ဂေါလ်နယ်တို့၌ တည် ထောင်ခဲ့သည်။ ဘင်္ဂေါလ်ပြည်နယ်မှ ပါတီမှာ အလုပ်သမားပါတီ ဖြစ်သည်။ အိန္ဒိယပြည်၏ပထမဆုံး အိန္ဒိယဆိုရှယ် လစ်များ၏ကွန်ဖရင့်ကို ၁၉၃၄ ခုနှစ်၊ မေလ (၁၇)ရက်နေ့တွင် ပက်(တ်)နာ၌ ကျင်းပခဲ့သည်။ (ဗဟုသုတဒိုင်ယာရီ-တွဲ- ၇)
ပထမအကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှကျွန်းဆွယ်မိသားစု ပြေးခုန်ပစ်ပွဲတော်ကြီးကို ယိုးဒယားနိုင်ငံ ဘန်ကောက် မြို့တော်တွင် ၁၉၅၉ ခု၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်နေ့မှ ၂၇ ရက်နေ့ထိ ၆ ရက်တိုင်တိုင်ကျင်းပခဲ့သည်။ ၄င်းပွဲတော်တွင် မြန်မာ ပြည်မှ ရွှေတံဆိပ် ၁၂ ခု၊ ငွေတံဆိပ် ၁၄ ခု၊ ကြေးတံဆိပ် ၁၄ ခု ရရှိပြီး ဒုတိယ စွဲခဲ့သည်။ (ဗဟုသုတဒိုင်ယာရီ-တွဲ-၁)
အရှင်လတ်လတ် မြေမျိုသူ (၅)ယောက်
(၁) သုပ္ပဗုဒ္ဓမင်း - ဘုရားဆွမ်းခံကြွရာလမ်း၌ မဖယ်ပေး၍ ကပိလဝတ်ပြည်၌ မြေမျိုခြင်း။
(၂) သုပ္ပဗုဒ္ဓမင်း၏သား ဒေဝဒတ် - ဘုရားကို အမျိုးမျိုး ပြစ်မှား၍ သာဝတ္ထိပြည် ရေကန်၏အနီး၌ မြေမျိုခြင်း။
(၃) စိဉ္စမာဏဝိကာ - ဘုရားကို ကိုယ်ဝန်ဖြင့် စွပ်စွဲ၍ ဇေတဝန်ကျောင်းတော် အနီး၌ မြေမျိုခြင်း။
(၄) နန္ဒသတို့သား - ဥပ္ပလဝဏ် ရဟန္တာမကို တောကျောင်း၌ မေထုန်မှုပြုကျင့်၍ မြေမျိုခြင်း။
(၅) နန္ဒကဘီလူး - ရှင်သာရိပုတ္တရာ မထေရ်ကို ဂိဇ္ဈကုဋ်တောင်၌ တရားထိုင်နေစဉ် ဦးခေါင်းကို ပုတ်၍ မြေမျိုခြင်း။
မြန်မာနှစ် ၁၂၅၃ ခုနှစ်တွင် မန္တလေး၌ ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ အဖ သီပေါမင်းဗြဲတိုက်သံတော်ဆင့် ဦးမောင်မောင်တင်၊ အမိ ဘဏ္ဍာစိုး ခင်ဖွား။ ဒေါ်စောမြဧကြည်သည် အသက် ၁၂ နှစ်အရွယ်တွင် သီပေါမင်း၏ဝဲဘက်အဆိုတော် ဦးလူကြီးထံ တွင် အငြိမ့်ပညာ သင်ကြားခဲ့သည်။ ၁၉၅၄ ခုနှစ်တွင် ဂုဏ်ထူးဆောင် ပညာရေးဝိဇ္ဇာဘွဲ့ကို ချီးမြှင့်ခြင်း ခံရသည်။ ၁၉၄၂ ခုနှစ်၊ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် စတင်ခဲ့သည့်အချိန်၌အထိ ရန်ကုန်ဂီတကျောင်းတွင် နည်းပြဆရာမကြီးအဖြစ် အမှုထမ်း ခဲ့၏။ (ဗဟုသုတဒိုင်ယာရီ-တွဲ-၂)
တစ်စက္ကန့်တွင် ၁၈၆ဝဝဝ မိုင် သွားသည်။ (ဗဟုသုတဒိုင်ယာရီ-တွဲ-၁)
အလောင်းတော်မြတ်၊ ဒေ​ဝဒတ်၊ ငါးဇာတ်သတ်ခဲ့ပုံ
ဂေါတမဘုရားအလောင်းတော်နှင့်ဒေဝဒတ်အလောင်းတို့သည် ဘဝအဆက်ဆက်တွင် တွေ့ဆုံဖြစ်ပျက် ပါရမီဖြည့်ဘက်များ ဖြစ်ကြ ရာ ဘဝငါးဘဝ၊ ဇာတ်ငါးဇာတ်တွင် ဒေဝဒတ်က အလောင်းတော်ကို အသေသတ်ခဲ့သည်။ လင်္ကာဖြင့် ဖော်ပြလိုက်သည်။
စူဠနန္ဒိယ၊ ဒဒ္ဒရနှင့်၊ ဓမ္မပါလာ၊ မဟာကဝိ၊ တွင်ဘိသညီ၊ ခန္တီဝါဒ၊ နာမပညတ်၊ ဤငါးဇာတ်၌၊ မုန်းလတ်တုံကျင်၊ ရှင်ဒေဝဒတ်၊ အသေသတ်၍၊ လူ-နတ်-ဆရာ သေရရှာ၏။ (မြန်မာမှုအဘိဓာန်-မောင်ဇနိယ)
(၁)သဉ္စိစ္စ အာပတ္တိံ အာပဇ္ဇတိ-စေတနာဖြင့် သိလျက် အပြစ်ကို ကျူးလွန်ခြင်း။
(၂)အာပတ္တိံ ပရိဂူဟတိ-ကျူးလွန်ပြီးသောအပြစ်ကို ထိန်ချန်ထားခြင်း။
(၃)အဂတိ ဂမနဉ္စ ဂစ္ဆတိ-ဘက်မလိုက်သင့်သည်ကို ဘက်လိုက်ခြင်း။
ရဟန်းတို့သည် ဤ ၃ ပါးကို မပြုကျင့်အပ်ပေ။
မြန်မာပြည်တဝှန်းလုံးတွင် ၁၉၆၂ ခုနှစ်မှ ၁၉၆၆ ခုနှစ်အထိ အလုပ်ခွင်၌ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုများမှာ စုစုပေါင်း ၁၅၇၆၂ မှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ထိုထိခိုက်မှုများအနက် ၃၈ ရာခိုင်နှုန်းမှာ လက်နှင့်လက်ချောင်းတွင်လည်းကောင်း၊ ၄၂ ရာခိုင်နှုန်း မှာ ခြေထောက်တွင်လည်းကောင်း၊ ၁ဝ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ခေါင်း၊ လည်ပင်းနှင့်မျက်စိ၊ မျက်နှာတို့တွင်လည်းကောင်း အသီးသီး ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ (ဗဟုသုတဒိုင်ယာရီ-တွဲ-၇)
မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီနှင့်အလုပ်သမားရေးရာဌာနမှ ကြီးကြပ်၍ အလုပ်သမားရေးရာပညာပေးသင်တန်း များကို ၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၁)ရက်နေ့မှစ၍ မင်္ဂလာဒုံ၊ အမှတ်(၁)လေ့ကျင့်ရေးစခန်း၌ တစ်ကြိမ်လျှင် အလုပ် သမား (၁ဝဝ)ကျစီ ရွေးချယ်၍ သင်တန်းပေးခဲ့သည်။ ပထမဆုံးသင်တန်းတွင် ဉာဏအလုပ်သမား ၃၈ ဦး၊ ကာယ အလုပ်သမား ၆၂ ဦး၊ အမ်အေ တစ်ဦး၊ ဘီအေ ၅ ဦး၊ အိုင်အေ ၂ ဦး၊ ထိုအထဲတွင် ပုဂ္ဂလိကပိုင်စက်ရုံ ၁၂ ခုမှ အလုပ် သမားကြီး ၂၃ ဦး၊ ပြည်သူပိုင်စက်ရုံ၊ ဘုတ်အဖွဲ့များနှင့်အစိုးရဌာနအသီးသီး ၄၁ ဌာနမှ ကာယ၊ ဉာဏအလုပ်သမား ၇၇ ဦးတို့ ဖြစ်သည်။ သင်တန်းကာလမှာ တနင်္ဂနွေ ၅ ပတ် ဖြစ်၏။ (ဗဟုသုတဒိုင်ယာရီ-တွဲ-၂)
၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ မတ်လမှ ၁၉၆၃ ခုနှစ်အတွင်း တော်လှန်ရေးအစိုးရ အလုပ်သမားဖြန်ဖြေရေးခုံရုံးမှ တိုင်ကြား၍ လက်ခံရ ရှိသည့်အလုပ်သမားအလုပ်ရှင်ပဋိပက္ခနှင့်အချိန်ပိုလုပ်ခများ မပေးခြင်း၊ ခွင့်ရက်နှင့်အခြားရက်အားများ နစ်နာမှု စသော အမှုပေါင်း ၇ဝ၆ မှုအနက် အမှုပေါင်း(၅၉ဝ)ကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခဲ့သည်။ (ဗဟုသုတဒိုင်ယာရီ-တွဲ-၂)
အလုပ်သမား သူရဲကောင်း ရွေးချယ်ရေးစည်းမျဉ်း
(၁)အလုပ်ကို ကျိုးနွံစွာ လုပ်ကိုင်သည့်စံပြအလုပ်သမား ဖြစ်သူ။
(၇)အများဆုံး ကုန်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်သူ။။
(၁ဝ)လုပ်အား နာရီပေါင်း အများဆုံး​ပေးနိုင်သူ။
အချက်တစ်ခု ၁ဝ မှတ်ပေးသည်။ အမှတ် ၉၅ မှ ၁ဝဝ ထိ ပထမဆင့်၊ ၈၅ မှ ၉၄ ထိ ဒုတိယဆင့်၊ ၇၅ မှ ၈၄ ထိ တတိယ ဆင့် စသည်ဖြင့် လုပ်သားသူရဲကောင်းများကို ရွေးချယ်သည်။ လုပ်သားသူရဲကောင်း ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ကို အလုပ်သ မားတစ်ရာလျှင် အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်ငါးဦးနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှ ကိုယ်စားလှယ် ငါးဦး ပါဝင်သော ၁ဝ ဦး အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်း၍ ရွေးချယ်စေခဲ့သည်။ ထိုအဖွဲ့၌ ပါဝင်နိုင်သူများမှာ အသက်အရွယ်အားဖြင့် ၃ဝ မှ ၅ဝ အတွင်း ရှိရ မည့်အပြင် လုပ်သက် ၃ နှစ်မှ ၅ နှစ်ရှိသူလည်း ဖြစ်ရမည်သာမက ရက်ပျက်နည်းပြီး အကျင့်စာရိတ္တ ကောင်းသူလည်း ဖြစ်ရမည်။
၁၉၆၅ ခု၊ နိုဝင်ဘာလ (၂၆)ရက်နေ့တွင် လုပ်သားသူရဲကောင်း ရွေးချယ်ရေးနှင့်အဖွဲ့လိုက် လုပ်အားယှဉ်ပြိုင်မှုကြီး ကြပ်ရေးကော်မီတီက စံပြလုပ်သား တတိယဆင့်အတွက် အလုပ်သမားပေါင်း ၅၄ဝ ကို ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ (ဗဟုသုတ ဒိုင်ယာရီ-တွဲ-၂)
၁၉၅၇ ခုနှစ်က မြန်မာပြည်တွင် အဝီစိတွင်းပေါင်း ၁၉ဝဝ တူးခဲ့သည်။ အနက် ၁၅ဝ ပေ၊ ပိုက်အကျယ် ၁ဝ လက်မ၊ တစ်နာရီ ရေဂါလံပေါင်း ၃ဝဝဝဝ ဖြစ်သည်။ အဝီစိတွင်းတူးစက်၏အမည်မှာ ဝင်တာဝိုက် ဖြစ်သည်။ အကြီးစားစက် မျိုးဖြစ်ပြီး တစ်လုံးလျှင် ကျပ်(၂ဝဝဝဝဝ)တန်သည်။ (ဗဟုသုတဒိုင်ယာရီ-တွဲ-၂)
၁၉၄၅ ခုနှစ်၊ ဥပဒေအရ အသံချဲ့စက် အသုံးပြုလိုလျှင် ခရိုင်ရဲဝန်ထံ အမိန့်တောင်းခံရသည်။ ဇာတ်သမား၊ တူရိယာ ဝိုင်းအတွက် အမိန့်တောင်းခံရန် မလိုဟု ရဲဥပဒေပုဒ်မ ၃၉ အရ ခြွင်းချက်ပေးထားသည်။ ကျူးလွန်က ထောင်ဒဏ် ၁၅ ရက် သို့မဟုတ် ဒဏ်ငွေ ၂ဝဝိ ဖြစ်စေ ၂ ရပ်စလုံးဖြစ်စေ ပေးရသည်။
တစက္ကန့်လျှင် ၁ဝ၆ဝ ပေ သွားသည်။ (ဗဟုသုတဒိုင်ယာရီ-တွဲ-၁)
ရန်ကုန်မြို့ရှိ အသံလွှင့်ဌာနကို ၁၉၃၇ ခုနှစ်က စတင်စမ်းသပ်ခဲ့သည်။ ပြည်လမ်းရှိ အသံလွှင့်ရုံသစ်ကြီးကို ၁၉၅၄ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂ ရက်နေ့တွင် စတင်တည်ဆောက်ခဲ့ရာ ၁၉၆ဝ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့တွင် လုံးဝပြီးစီးခဲ့ပြီး စတင် အသံလွှင့်ခဲ့သည်။ အသံလွှင့်ရုံ၏အကျယ်အဝန်းမှာ စတုရန်းပေ ၉၃၇၇ဝ ရှိပြီး ငွေပေါင်း (၈၇ဝဝဝဝဝ)ကျပ် ကုန်ကျခဲ့ သည်။ အသံလွှင့်ရာ၌ မြန်မာဘာသာ(ပထမအစီအစဉ်)မြန်မာဘာသာ(ဒုတိယအစီအစဉ်)ကချင်၊ ကရင်(ကော်သူး လေ)၊ ချင်း၊ ပအိုဝ့်၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ရိုဟင်ဂျာ၊ ရှမ်း၊၊ လားဟူစသော တိုင်းရင်းသားဘာသာ၊ ဟိန္ဒူစတန်နီဘာသာနှင့်အင်္ဂ လိပ်ဘာသာတို့ဖြင့် အသံလွှင့်သည်။ အသံလွှင့်ရုံ၌ အမှုထမ်းပေါင်း ၃၁၉ ဦးရှိပြီး တူရိယာအဖွဲ့များမှာ မြန်မာကာလ ပေါ်အဖွဲ့ ၁၃၅ ဖွဲ့ မြန်မာသီချင်းကြီးအဖွဲ့ ၂၃ ဖွဲ့နှင့်အင်္ဂလိပ်တူရိယာအဖွဲ့ ၅ဝ ရှိသည်။ (ဗဟုသုတဒိုင်ယာရီ-တွဲ-၂)
၁၉၆၆ ခုနှစ်၊ နွေရာသီအတွင်း မြန်မာပြည်တဝှန်းလုံးတွင် အသုံးလုံး(အရေး-အဖတ်-အတွက်)သင်တန်းများကို ဖွင့် လှစ်သင်ကြားခဲ့သည်။ ထိုသင်တန်းများတွင် တိုင်းအလိုက် အောင်မြင်မှု ရရှိသောစာရင်းမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ် သည်။
၂။ မန္တလေးတိုင်း (၂)
၃။ စစ်ကိုင်းတိုင်း (၂)
အသုံးလုံးကျေသင်တန်းကို အသုံးလုံးကျေသင်တန်း ကြီးကြပ်ညှိနှိုင်းရေးဗဟိုကော်မီတီမှ ဦးဆောင်ပြုလုပ်သည်။ စာ မတတ်သူ ပပျောက်ရေးလုပ်ငန်းကို ၁၉၆၅ ခုနှစ်မှစတင်ခဲ့သည်။ ထိုစဉ်က မြန်မာပြည်တစ်ဝှန်းလုံးတွင် ခရိုင်ပေါင်း ၃၇ ခရိုင်အတွင်း အခြေစိုက်စခန်းပေါင်း ၅၅၆ ခုကို ဖွင့်လှစ်၍ ဆရာ(၂၃ဝ၄)ဦးက သင်ကြားခဲ့ကြသည်။ စခန်းတစ်ခု လျှင် သင်တန်းသား(၃ဝ)ခန့်ထား၍ သင်ကြားပေးခဲ့ကြသည်။ ၁၉၆၆ ခုနှစ်တွင်မူ ခရိုင်ပေါင်း ၄၇ ခရိုင်မှ မြို့နယ်ပေါင်း ၂၃၅ ခုတွင် အခြေစိုက်စခန်းပေါင်း ၂၅၃ဝ ကို ဖွင့်လှစ်ကာ ဆရာ(၁​၈ဝ၃၂)ဦးဖြင့် သက်ကြီးသင်တန်းသား (၁၇၃၇၁)ဦး ကို သင်ကြားပေးခဲ့ကြသည်။ အချိုးအစားအရ သင်တန်းသား(၁ဝ)ဦးလျှင် ဆရာတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ သင်တန်းပြီးဆုံး ချိန်တွင် သင်တန်းသားများအနက် ၆၆၃၆၃ ဦးမှာ ကောင်းစွာ စာဖတ်တတ်သွားပြီး ၆၆၇၇ဝ ဦးမှာ အတော်အတန် စာဖတ်နိုင်ခဲ့ကြသည်။
သင်တန်းသား ၁၇၃၇၁၃ ဦးအနက် ၄၈၃၆၇ ဦးမှာ သင်တန်းတက်ရောက်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ သင်တန်းတက် ရောက်ခဲ့ကြသူများအနက် အသက် ၁၅ နှစ်မှ ၂၅ နှစ်အတွင်း ၄၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ အသက် ၂၆ နှစ်မှ ၃၅ နှစ်အအတွင်း ၂၇ ရာခိုင်နှုန်း၊ အသက် ၃၆ နှစ်မှ ၄၅ နှစ်အတွင်း ၁၈ ရာခိုင်နှုန်း၊ အသက် ၄၅ နှစ်နှင့်အထက်မှာ ၁ဝ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။
တိုင်းအလိုက် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော သင်တန်းစခန်းနှင့်သင်တန်းသားများမှာ မကွေးတိုင်း၌ စခန်း(၄ဝ၇)ခု၊ သင်တန်းသား ၂၅၇၉ဝ၊ ၄င်းတို့အနက် ၁ဝဝ၅၁ ဦးမှာ လုံးဝစာတတ်သွားသည်။ မန္တလေးတိုင်း(၂)၌ စခန်း ၃ဝ၃ ခု၊ သင်တန်းသား ၂၄၁၂၃ ဦး၊ ၄င်းတို့အနက် ၉၇၃၉ ဦးမှာ လုံးဝစာတတ်သွားသည်။ စစ်ကိုင်းတိုင်း(၂)တွင် စခန်း ၂၆၂ ခု၊ သင်တန်းသား ၂ဝ၆၆၉ ဦး၊ ၄င်းတို့အနက် ၇ဝ၂၃ ဦးမှာ လုံးဝစာတတ်သွားသည်။ (ဗဟုသုတဒိုင်ယာရီ-တွဲ-၇)
အဟီး၊ ဦး၊ သံတော်ဆင့်
ဦးအဟီးသည် မင်းတုန်းမင်းလက်ထက် ၁၈၇၄ ခုနှစ်တွင် နေမျိုးသီဝသိဒ္ဓိဘွဲ့ခံ သံတော်ဆင့်အဖြစ် ခန့်အပ်ခံခဲ့ရ၏။ သူ သည် ဖခင် တရုတ်လူမျိုး၊ မိခင် မြန်မာလူမျိုးတို့က ဖွားမြင်သူ ဖြစ်သည်။ ဘာသာစကား (၆)မျိုးကို ကျွမ်းကျင်ပြီး ရတနာပုံနေပြည်တော်သတင်းစာအား ကြီးကြပ်ထုတ်ဝေခဲ့ရသည်။ ဦးအဟီးသည် သီပေါမင်း ပါတော်မူသွားပြီးနောက် ဗြိတိသျှအစိုးရထံ ပုံနှိပ်စက်ငှားရမ်းခလက်ကျန်ငွေများ တောင်းခံခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ (ကုန်းဘောင်ခေတ် မင်းမှု ထမ်းများ အဘိဓာန်-တင်နိုင်တိုး)
Published on Saturday, 06 August 2016 08:53
မြန်မာသရ (၂၂)လုံးတို့တွင် အပါအဝင်ဖြစ်သော (၂)လုံးမြောက်သရ။
အာဇာနည်ဗိမာန်ကို ၁၉၄၇ ခုနှစ်က တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ရွှေတိဂုံစေတီမြောက်ဘက်မုခ်အနီး ထရန်စပို့လမ်းပေါ်၌ တည်ရှိသည်။ (ဗဟုသုတဒိုင်ယာရီ-တွဲ-၂)
(၁)သီဟာဇနေယျ - ခြင်္သေ့အာဇာနည်
(၂)ဟတ္ထာဇနေယျ - ဆင်အာဇာနည်
(၃)အဿဇနေယျ - မြင်းအာဇာနည်
(၄)ဥသဘဇနေယျ - နွားလားအာဇာနည် (ဗဟုသုတဒိုင်ယာရီ-တွဲ-၂)
(၅)ပိသုဏဝါစာ ဝေရမဏိ - ချောပစ် ကုန်းတိုက်သော စကားပြောဆိုခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်၏။
(၆)ဖရုသဝါစာ ဝေရမဏိ - ကြမ်းတမ်း ဆဲရေးသော စကားပြောဆိုခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်၏။
(၇)သမ္ဖပ္ပလာပါ ဝေရမဏိ - အကျိုးမရှိ သိမ်ဖျင်းသော စကားပြောဆိုခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်၏။
(၈)မိစ္ဆာဇီဝါ ဝေရမဏိ - မှားသော အသက်မွေးခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်၏။ (မဇ္ဈိမပဏ္ဏာသ၊ မဓုရသုတ်)
အာဖရိကတိုက်မှ အီဂျစ်နိုင်ငံနှင့်အာရှမိုင်းနားဒေသမှ ဆီးရီးယားနိုင်ငံတို့သည် အာရပ်ပြည်ထောင်စုအဖြစ် ဖွဲ့စည်းခဲ့ လေသည်။ ယီမင်နိုင်ငံကလည်း ထိုပြည်ထောင်စုအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့လေသည်။ (၁၉၄၅ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၂ ရက်​ နေ့က ကိုင်ရို၌ အာရပ်အဖွဲ့ချုပ်ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ အီဂျစ်၊ အီရပ်၊ ဆော်ဒီအာရေဗျ၊ ဆီးရီးယား၊ လီဘင်နွန်၊ ဂျော်ဒန် နှင့်ယီမင်နိုင်ငံတို့ ပါဝင်၍ လစ်ဗျား၊ ဆူဒန်၊ မော်ရိုကို၊ ကူဝိတ်နှင့်အဲလ်ဂျီးရီးယား နိုင်ငံများလည်း ပါဝင်လာသည်။) ၁၉၅၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် ဖာရောက်ဘုရင်ကို စစ်တပ်က နန်းချ၍ ၁၉၅၃ ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင် အီဂျစ်ပြည်အား သမ္မတ နိုင်ငံအဖြစ် ထူထောင်ခဲ့သည်။ (ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ အဘိဓာန်)
၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁၂ ရက်နေ့တွင် စင်္ကာပူ၌ စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ ကြီးကြပ်ရေး သင်တန်းပေးရေးအတွက် အာရှနိုင်ငံများဆိုင်ရာ ဗဟုသုတ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ တစ်ရပ်ကို စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ (ဗဟုသုတဒိုင်ယာရီ တွဲ ၇)
(၁)ကာမာသဝ - ကာမ၌ ယိုစီးခြင်း။
(၂)ဘဝါသဝ - ဘဝ၌ ယိုစီးခြင်း။
(၃)ဒိဋ္ဌာသဝ - အယူ၌ ယိုစီးခြင်း။
(၄)အဝိဇ္ဇာသဝ - မသိမှု၌ ယိုစီးခြင်း။
Published on Tuesday, 02 August 2016 16:12
အင်္ဂလန်ပြည်၏အစောဆုံး ပုံနှိပ်သတင်းစာမှာ (Weekly News) ဖြစ်ဟန်တူပြီး ၁၆၂၁ ခုနှစ်၊ ဂျိမ်း(စ်)၁ အုပ်စိုးချိန် တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
အင်္ဂလန်ပြည်၏ လက်ရှိ ရောင်းကောင်းဆုံး သတင်းစာမှာ (Daily Express)ဖြစ်သည်။ အခြား ရောင်းကောင်းသော သတင်းစာများ (The Time) (The Guardian) နှင့် (The Daily Telegraph) တို့ဖြစ်ကြသည်။ (ဗဟုသုတဒိုင်ယာရီ-တွဲ-၇)
အင်္ဂလန်ပြည်ကို နော်မန်များ အောင်နိုင်ပြီးနောက် နှစ်ပေါင်း(၂​ဝဝ-၃ဝဝ)အတွင်း အင်္ဂလိပ်စာသည် ကမ္ဘာတွင် နေရာ မရသေး။ ထိုအချိန်က နော်မန်၊ ပြင်သစ်၊ လက်တင် ဘာသာစကား စသည်တို့ကိုသာ အသုံးများခဲ့ကြပြီး ပညာ တတ်မှန်လျှင် လက်တင်ဘာသာကို အထူး အရေးပေး သင်ကြားခဲ့၏။ (ဗဟုသုတဒိုင်ယာရီ-တွဲ-၇)
၁၈၂၄ ခု၊ အင်္ဂလိပ်မြန်မာ ပထမစစ်ပွဲအပြီးတွင် ရခိုင်တိုင်းနှင့်တနင်္သာရီတိုင်းကို သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သော်လည်း အားရကျေနပ်ဟန် မတူ သော နယ်ချဲ့သမားများသည် အေးချမ်းစွာ နေတတ်သော ဗမာများကို ဒုတိယစစ်ပွဲဖြင့် အနိုင်ယူလျက်...
၁၈၂၅ ခု၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၆)ရက်။ မြန်မာ သရက်တစ်ပင်ကျွန်းဦးခံတပ်နှင့်ထန်းတစ်ပင်ခံတပ်များကို အင်္ဂလိပ်ဗိုလ်မှူးဂေါ်ဒွင်က တိုက်သည်။
၁၈၂၅ ခု၊ ​ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၁၁)ရက်။ သံလျင် မြန်မာတပ်ကို အင်္ဂလိပ်ဗိုလ်မှူးကြီး အားရင်းတန်က တိုက်သည်။
၁၈၂၅ ခု၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၁၇)ရက်။ မှော်ဘီတွင် မဟာသီလဝတပ်ကို အင်္ဂလိပ်တပ်များ လာတိုက်သည်။
၁၈၂၅ ခု၊ ဧပြီလ (၁)ရက်။ ​မဟာဗန္ဓုလ ဓနုဖြူမြို့၌ ကျဆုံးသည်။
၁၈၂၅ ခု၊ ဧပြီလ (၃ဝ)ရက်။ ဂျင်နရဲလ်မက်ဘီး ဦးစီးသော ဗြိတိသျှတပ်က သံတွဲကို သိမ်းယူသည်။
၁၈၂၅ ခု၊ နိုဝင်ဘာလ (၁ဝ)ရက်။ မြန်မာဗိုလ်ချုပ် မဟာနေမျိုး တပ်မကြီး၏ရှေ့ပြေးတပ် ဝက်ထီးကန်သို့ ရောက်သည်။
၁၈၂၅ ခု၊ နိုဝင်ဘာလ (၁၅)ရက်။ ဝက်ထီးကန် မြန်မာတပ်ကို အင်္ဂလိပ်ဗိုလ်မှူးကြီး မက်ဒေါ်ဝယ်တပ်က လာရောက်တိုက်ခိုက်သည်။
၁၈၂၅ ခု၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃ဝ)ရက်။ အင်္ဂလိပ်မြန်မာ စစ်ပြေငြိမ်းရေး ဆွေးနွေး​ပွဲကို မြစ်လယ်ရှိ ဖောင်ပေါ်တွင် ဆွေးနွေးကြသည်။
၁၈၂၆ ခု၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၂၄)ရက်။ ရန္တပိုစာချုပ်ကကို ချုပ်ဆိုသည်။ (အင်္ဂလိပ်မြန်မာ ပထမစစ်ပွဲ ပြီးပြတ်သည်။)
၁၈၂၆ ခု၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁ဝ)ရက်။ မွန်တို့ ရန်ကုန် ပုဇွန်တောင်တပ်ကို တက်ရာတွင် တွန်းလှန်အောင်မြင်သည်။
၁၈၂၇ ခု၊ ဒီဇင်ဘာလ (၆)ရက်။ ဘင်္ဂလားသွား မြန်မာသံအဖွဲ့ ကလကတ္တားမြို့သို့ ဆိုက်ရောက်သည်။
၁၈၃ဝ ခု၊ ဇွန်လ (၁၇)ရက်။ မေဂျာဘာနေး အင်းဝသို့ ရောက်သည်။
၁၈၃ဝ ခု၊ ဩဂုတ်လ (၇)ရက်။ အင်္ဂလိပ်ကိုယ်စားလှယ် မေဂျာဘာနေးသည် ဘကြီးတော်ဘုရား ရှေ့တော်၌ ရာမဇာတ် ကြည့်သည်။
၁၈၃ဝ ခု၊ စက်တင်ဘာလ (၁၈)ရက်။ အီတလမြို့ဝန် ဟံသာဝတီသို့ ရောက်သည်။
၁၈၃၃ ခု၊ ဇူလိုင်လ (၁၂)ရက်။ ဘင်္ဂလားသွား သံအဖွဲ့ ရန်ကုန်မြို့သို့ ပြန်လည်ဆိုက်ရောက်သည်။
၁၈၃၃ ခု၊ စက်တင်ဘာလ (၂၁)ရက်။ ဘင်္ဂလားသွား သံအဖွဲ့ အင်းဝမြို့တော်သို့ ပြန်ရောက်သည်။
၁၈၃၄ ခု၊ ဇန်နဝါရီလ (၉)ရက်။ ကလေးကဘော် တောင်ကြားဒေသကို မြန်မာတို့ ပြန်ရသည်။
၁၈၃၅ ခု၊ ဩဂုတ်လ (၂၉)ရက်။ ဟံသာဝတီဝန်ကြီး ရန်ကုန်မြို့တွင် ကွယ်​လွန်သည်။
၁၈၃၆ ခု၊ မေလ (၁၁)ရက်။ ဘကြီးတော် နန်းကျသည်။
၁၈၃၇ ခု၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ အင်္ဂလိပ်တို့အား မြန်မာက စစ်လျော်ကြေး အပြေပေးပြီးသည်။
၁၈၃၇ ခု၊ ဧပြီလ (၃ဝ)ရက်။ ဘကြီးတော်က ညီတော် သာယာဝတီမင်းအား ထီးနန်းလွှဲအပ်သည်။
၁၈၃၈ ခု၊ ဧပြီလ (၁၅)ရက်။ ညောင်ရမ်းမင်းသား(စကြာမင်း)ကို ​ရေမှာဖျောက်သည်။
၁၈၃၉ ခု၊ မတ်လ (၂၁)ရက်။ အမရပူရ၌ ငလျင်ကြီး လှုပ်သည်။
၁၈၄ဝ ခု၊ မတ်လ (၂၇)ရက်။ ရွှေထားမင်းသား ပုန်ကန်သည်။
၁၈၄၁ ခု၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၇)ရက်။ ဒုတိယနဝဒေး ကွယ်လွန်သည်။
၁၈၄၁ ခု၊ အောက်တိုဘာလ (၂)ရက်။ သာယာဝတီမင်း ရန်ကုန်သို့ ရောက်သည်။
၁၈၄၂ ခု၊ ဇန်နဝါရီလ (၂ဝ)ရက်။ သာယာဝတီမင်း ရွှေတိဂုံဘုရား၌ ခေါင်းလောင်းလှူသည်။
၁၈၄၆ ခု၊ အော်တိုဘာလ (၁၅)ရက်။ ဘကြီးတော်မင်း နတ်ရွာစံသည်။
၁၈၄၆ ခု၊ နိုဝင်ဘာလ (၁၇)ရက်။ သာယာဝတီမင်း နတ်ရွာစံသည်။
၁၈၄၇ ခု၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၂၇)ရက်။ ပုဂံမင်း နန်းတက်သည်။
၁၈၅ဝ ခု၊ ဇန်နဝါရီလ (၇)ရက်။ နောက်ဆုံး အင်္ဂလိပ်သံအရာရှိ မက္ကလောက် အင်းဝမှ ပြန်သွားသည်။
၁၈၅၂ ခု၊ အောက်မြန်မာပြည် တပြည်လုံးကိုလည်း အပေါ်ပိုဒ် ဖော်ပြထားခဲ့သည့်ဒုတိယစစ်ပွဲဖြင့် အရသိမ်းပိုက်ပြန်လေသည်။ ထိုနောက် နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်တို့က သယံဇာတ ပေါများသော မြန်မာပြည်အား အမက်မောကြီး မက်မောလာကာ...
၁၈၅၃ ခု၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၁၇)ရက်။ မင်းတုန်းမင်း နန်းတက်သည်။
၁၈၅၃ ခု၊ ဇူလိုင်လ (၁၁)ရက်။ က​နောင်မင်းအား အိမ်​ရှေ့အရာ ပေးသည်။
၁၈၅၃ ခု၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၈)ရက်။ အထက်-အောက် မြန်မာနိုင်ငံ နယ်ခြားကျောက်တိုင်ကို သရက်ခရိုင်၌ စိုက်ထူသည်။
၁၈၅၇ ခု၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၈)ရက်။ မန္တလေးမြို့ စတည်သည်။
၁၈၅၉ ခု၊ မေလ (၂၂)ရက်။ မန္တလေးမြို့ရိုးတော်နှင့်ခုနစ်ဌာန အုတ်မြစ်ချသည်။
၁၈၆၃ ခု၊ မတ်လ (၇)ရက်။ မန္တလေးမြို့ အပိုင်းအခြား သတ်မှတ်၍ ၅၄ ရပ်ကွက် အမည်သမုတ်သည်။
၁၈၆၅ ခု၊ နိုဝင်ဘာလ (၁၁)ရက်။ မန္တလေး နေပြည်တော်၌ ဒင်္ဂါးသွန်းစက်ရုံကို ဖွင့်လှစ်သည်။
၁၈၆၆ ခု၊ ဇွန်လ (၁၈)ရက်။ မြင်ကွန်းမင်းသားနှင့်မြင်းခုန်တိုင်မင်းသားတို့ ပုန်ကန်သည်။
၁၈၆၆ ခု၊ ဇွန်လ (၁၈)ရက်။ ကနောင်မင်းသားအား မြင်ကွန်းနှင့်မြင်းခုန်တိုင်မင်းသားတို့ လုပ်ကြံ၍ ကံကုန်သည်။
၁၈၆၆ ခု၊ ဩဂုတ်လ (၂၂)ရက်။ ရန်ကုန် အကျဉ်းထောင်မှ လွတ်မြောက်လာခဲ့သော မြင်ကွန်းမင်းသားအား ​မှော်ဘီမြို့အုပ် မောင်ကြည်က ဖမ်းဆီး၍ ရန်ကုန်သို့ ပြန်ပို့သည်။
၁၈၆၉ ခု၊ ဒီဇင်ဘာလ။ မြန်မာနိုင်ငံ၌ ပထမအကြိမ် သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူသည်။
၁၈၇၂ ခု၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၄)ရက်။ ဘုရင်ခံချုပ် ​လော့ဒ်မေရိုး ကပ္ပလီကျွန်းတွင် ဓားထိုးခံရ၍ ကွယ်လွန်သည်။ (ရန်ကုန်အရောက် ထီး ဖြူမိုးခံခဲ့သူ ဖြစ်သည်။)
၁၈၇၃ ခု၊ ဇန်နဝါရီလ။ လောကီသုတပညာသတင်းစာကို စတင်ထုတ်ဝေသည်။
၁၈၇၃ ခု၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၄)ရက်။ ပြင်သစ်မြန်မာ စာချုပ် ချုပ်ဆိုသည်။
၁၈၇၄ ခု၊ ဇန်နဝါရီလ (၁)ရက်။ ရခိုင်ဝန်ရှင်တော်မင်းကြီး အက်ရှလီအီဒင်က မြန်မာနိုင်ငံတွင် မီးရထားလမ်း ဖောက်ရန် အစီရင်ခံ သည်။
၁၈၇၄ ခု၊ စက်တင်ဘာလ (၁၇)ရက်။ ကင်းဝန်မင်းကြီးသံအဖွဲ့ ဥရောပတိုက်မှအပြန် ရန်ကုန်မြို့သို့ ဆိုက်ရောက်သည်။
၁၈၇၅ ခု၊ မတ်လ (၂၁)ရက်။ ရတနာပုံသတင်းစာကို စတင်ထုတ်ဝေသည်။
၁၈၇၇ ခု၊ မေလ (၁)ရက်။ ဧရာဝတီမြစ်ဝှမ်း မီးရထားလုပ်ငန်းကို စတင်သည်။
၁၈၇၇ ခု၊ မေလ (၁)ရက်။ ရန်ကုန်နှင့်ပြည် မီးရထားလမ်း ဖွင့်လှစ်သည်။
၁၈၇၈ ခု၊ အောက်တိုဘာလ (၁)ရက်။ မင်းတုန်းမင်း နတ်ရွာစံသည်။
၁၈၇၈ ခု၊ အောက်တိုဘာလ (၂)ရက်။ သီပေါဘုရင် နန်းတက်သည်။
၁၈၇၉ ခု၊ အောက်တိုဘာလ (၂၃)ရက်။ မြန်မာသံအဖွဲ့ အင်္ဂလိပ်အစိုးရထံ စေလွှတ်သည်။ သရက်မြို့တွင် ရှေ့ဆက်မသွားရန် အင်္ဂလိပ် တို့က တားဆီးသည်။
၁၈၈၄ ခု၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၂၇)ရက်။ ရန်ကုန်-ပဲခူး မီးရထားလမ်း ဖွင့်လှစ်သည်။
၁၈၈၄ ခု၊ ဇွန်လ (၁)ရက်။ ပြင်သစ်မြန်မာ စာချုပ်ကို ပြင်သစ်ပြည် ပါရီမြို့တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးသည်။
၁၈၈၄ ခု၊ ဩဂုတ်လ (၁)ရက်။ ပြွန်တန်ဆာသို့ မီးရထားလမ်း ပေါက်သည်။
၁၈၈၅ ခု၊ တတိယစစ်ပွဲဖြင့် သီပေါမင်းအား အရဖမ်းလျက် အထက်မြန်မာပြည်ကိုပါ သိမ်းပိုက်ကြလေတော့သည်။
ထိုစဉ် အားမတန်၍ မာန်ကို လျှော့ကာ ကျွန်​ဘဝမှ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းနေကြသော ဗမာစိတ် ရှိသူများအဖို့ ငါတို့ဗမာ တွေ အချင်းချင်း မညီညွတ် မစည်းလုံးကြ၍ ထီးနန်းပျောက်ခဲ့ရလေပြီ ဟူသော အသိကြောင့် ယူကြုံးမရနိုင်အောင်ပင် ဖြစ်၍ နေကြရ လေသည်။
ထိုသို့ ယူကြုံးမရ ဖြစ်နေကြရသောအချိန်များမှာပင် ဗမာစျေးဖျက်သော တချို့လူများသည် လူမျိုးခြားအား ဒူးထောက်ခစား ဖော်လံ ဖားနေကြသောသူများလည်း ရှိ၏။ မည်မျှပင် ကျွန်စိတ်ပေါက်ကုန်ကြသလဲဟုဆိုလျှင် မိမိတို့နာမည်ကို မစ္စတာနှင့်တွဲဖက်၍ ခေါ်ရုံ နှင့်မပြီးသေးပဲ မိမိတို့မွေးဖွားလာသော သားသမီးများကိုပင် ဒေစီ ပဂ္ဂီ ဂျော်နီ စသော အင်္ဂလိပ်နာမည်များဖြင့် ကင်ပွန်းတပ်၍ပင် ပေးထားတတ်ကြချေသေး၏။ ဤအမွေဆိုးအမွေနှစ်များသည်ကား ယနေ့တိုင် ဗမာများ၌ ကြွင်းကျန်၍ ရှိကြချေသေး၏။ ဗမာတွေ ကောင်းစားဖို့ ဗမာတွေအတွက်ဟု အော်ဟစ်ကြွေးကြော်လာသော နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများသည်ပင် ၅ဝဝိ စား ဝန်ကြီးရာထူး လက်ခံကာ အင်္ဂလိပ်နောက်လိုက် ဖြစ်လျက် ဗမာလူထုအပေါ် ပြန်လည်၍ ချုပ်ချယ်လာကြသည်။
ထို့ကြောင့်လည်း ကိုယ့်တိုင်းပြည် ကိုယ့်လူမျိုးအပေါ် မတရားလုပ်လျှင် မချိ​အောင် နာတတ်သောကြောင့် ဗမာလူမျိုးများမှာ တစ ထက်တစ တော်လှန်ရေးသမားဘဝသို့ ရောက်မှန်းမသိပင် ရောက်၍ လာခဲ့ကြလေတော့သည်။ (ဗမာ့တော်လှန်ရေး အဘိဓာန်-ဦးမြင့် ဝေ)
အင်္ဂလိပ်အရင်းရှင် နယ်ချဲ့သမားတို့သည် မြန်မာပြည်တစ်ပြည်လုံးအား...
၁၈၈၆ ခု၊၊ ဇန်နဝါရီလ (၁)ရက်၊ သောကြာနေ့မှာ မြန်မာပြည်အား အင်္ဂလိပ်တို့ သိမ်းယူရလိုက်ပြီး ဖြစ်ကြောင်း အိန္ဒိယပြည်ရှိ ဘုရင်ခံ ချုပ်က ကျေညာချက်တစ်ရပ် ထုတ်ပြန်လိုက်သော်လည်း...။
အထက်ဖော်ပြခဲ့သော မျိုးချစ်တို့၏အနိုင်မခံ အရှုံးမပေးသော စိတ်ဓာတ်ဖြင့် အင်အားစုပြီးလျှင် တစ်နေရာပြီးတစ်နေရာ ခုခံတော် လှန်နေကြသဖြင့် (၁ဝ)နှစ်ကျော် အချိန်ကြာသည့်တိုင် စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအရသာ အုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပေသည်။ မြန်မာလူမျိုးများမှာ တိုင်း ပြည်နှင့်တကွ မိမိတို့၏ဘုရင်ကိုပါ ဖမ်းယူသွားခြင်းခံကြရသည့်အတွက် မြန်မာ့သွေး မြန်မာ့ဟန်ဖြင့် တိုင်းတစ်ပါးသား လူမျိုးခြား တို့စိုးမိုးအုပ်ချုပ် လွှမ်းအုပ်ထားသည်ကို မခံမရပ်နိုင် ဖြစ်ကာ လက်နက်အင်အား လူအင်အားချင်း မယှဉ်နိုင်သော်လည်း အင်္ဂလိပ် စစ်တပ်များကို ရသမျှသော ဓားလှံသေနတ်၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်များဖြင့် အင်စုံအားစုံ အစွမ်းကုန် ခုခံတိုက်ခိုက် တော်လှန်နေကြသ ဖြင့် အင်္ဂလိပ်များအဖို့ အုပ်ချုပ်ရသည်မှာ လွယ်ကူလှသည်တော့ မဟုတ်ပေ။ ထိုကဲ့သို့ အင်္ဂလိပ်အား ပုန်ကန်တော်လှန်ခဲ့ကြသော မျိုး ချစ်များမှာလည်း ဗမာပြည်၌ ရေတွက်၍ မရနိုင်လောက်အောင် ရှိပေလိမ့်မည်။ (ဗမာ့တော်လှန်ရေးအဘိဓာန်-ဦးမြင့်ဝေ)
အင်္ဂါဇာတ် ခိုင်မာခြင်း အကြောင်းရင်း
လိင်အင်္ဂါ ခိုင်မာခြင်း အကြောင်း(၅)ပါး ဖြစ်သည်။
(၂)ကျင်ငယ် စွန့်လို၍ ခိုင်မာခြင်း။
(၃)ကျင်ကြီး စွန့်လို၍ ခိုင်မာခြင်း။
(၅)လိင်ချောင်း လိင်အင်္ဂါအတွင်း မှီတင်းနေသော ပိုးတို့ ကိုက်ခဲ၍ ခိုင်မာခြင်း။
ရာဂါ၊ ဝါတ၊ ပဿာဝနှင့်၊ ဝစ္စတဖြာ၊ ဥစ္စာလိင်္ဂ၊ ပိုးကိုက်ကြ၍၊ အင်္ဂဇာတာ၊ ခိုင်လေရာ၏။ (မြန်မာမှုအဘိဓာန် - မောင်ဇနိယ)
အင်ဂျန်းယန်မြို့နယ်သည် ၁၉၈၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် ဌာနဆိုင်ရာများကို မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် ယာယီ​ ပြောင်းရွှေ့ ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။ အင်ဂျန်းယန်မြို့နယ်၏သမိုင်းမှတ်တမ်းစာအုပ် (၃ဝ-၁-၈၁)မှ ကောက်နုတ် ဖော်ပြ ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အင်ဂျန်းယနန်(N Jang Yang) မြို့နယ်သည် နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ် လက်ထက် မတိုင်မီက ကချင်ဒူးဝါးကြီးများက နယ်မြေ ပိုင်းခြား သတ်မှတ်ပြီး ဦးစီးအုပ်ချုပ်ခဲ့သော နယ်မြေဒေသ ဖြစ်ပါသည်။ ၁၉၂ဝ ပြည့်နှစ်တွင် နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်က တောင် တြိဂံနယ်မြေ (ဒေသအခေါ် မလိအင်မိုင်ဝလောင်) ယခုအခေါ် အင်ဂျန်းယန် မြို့နယ်သို့ ထိုးဖောက် ​ဝင်​ရောက်ခဲ့ပါ သည်။ ဆွမ်ပရာဘွမ်ဆောင် တောင်တန်းဝန်ထောက် (၂)ဦး ခန့်ထား၍ အုပ်ချုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုစဉ်အခါက ကျေးရွာ အုပ်စု(၁ဝဝ) နှင့် ကျေးရွာငယ် (၃၉၄) ရှိကြောင်း သိရပါသည်။
တော်လှန်ရေးကောင်စီ လက်ထက် ၁၉၆၅ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်​နေ့တွင် မြို့နယ်အဆင့် ဖွဲ့စည်း သတ်မှတ်ခဲ ပါသည်။ မြို့နယ်ရုံးများကို ယခင် အင်ဂျန်းယန်တောင်အုပ် ရုံးစိုက်ရာ အင်ဂျန်းယန်ရွာတွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး အင်ဂျန်းယန် မြို့နယ်ဟု ခေါ်ဆိုခဲ့ပါသည်။ အင်ဂျန်းယန်၏အဓိပ္ပါယ်မှာ အင်ဂျန်း(N Jang) မှာ အင်ဂျန်းဒူးဝါး တည်ထောင်ခဲ့သော နေရာ၊ ယန်မှာ မြေပြန်။ အင်ဂျန်းယန်မှာ အင်ဂျန်းဒူးဝါး တည်ထောင်ခဲ့သော မြေပြန့်ဟု အဓိပ္ပါယ်ရပါသည်။ အံ့ဖွယ် ဒေသများမှာ-
(၁) ငေါ့ဘွမ် (Ngaw Bum) ကျောက်တောင်နှစ်လုံး။
အင်ဂျန်းယန်မြို့၏ မြောက်ဘက်တွင် အမြင့်ပေ (၄၅ဝဝ) ရှိ ကျောက်တောင် ဖြစ်ပြီး ပုပ္ပါးတောင်၊ ဇွဲကပင်တောင်ကဲ့သို့ အခြားတောင်များနှင့် မတူဘဲ တမူထူးခြား၍ ထီးထီးမားမားဖြင့် တောင်နှစ်လုံး ပိုင်းလျက် တည်ရှိပါသည်။
(၂) ဘွမ်ဘာ့ဘွမ် (Bum Ba Bum) ကျောက်တောင်။
အင်ဂျန်းယန်မြို့၏ အရှေ့ဘက်တွင် ရှိပြီး အမြင့်ပေ (၂၈၉၆) ရှိပါသည်။ ထောင့်မှန်တြိဂံ ထောင်ထားသကဲ့သို့ ရှိပြီး တစ်ဖက်တွင် တောင်ခြေမှ တောင်ထိပ်အထိ လွယ်ကူစွာ တက်နိုင်ပြီး ကျန်မျက်နှာပြင် တစ်ဖက်တွင် အလွန် မတ် စောက်စွာ တည်ရှိပါသည်။
(၃) ဘွမ်လန်ဘွမ်တောင် (Bum Lan Bum Tawng) ။
အမြင့်ပေ (၅၄ဝ၅) ရှိပြီး စခန်းမြို့ တည်ရန် အလွန် ကောင်းမွန် သင့်လျော်သော တောင် ဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။ တောင်ခြေရင်းမှ တောင်ထိပ်အထိ မြေသား တည်ရှိပုံ ပြေပြစ်ပြီး မတ်စောက်သောနေရာ ဟူ၍ မရှိချေ။ တောင်၏ ဆင်ခြေလျှော တစ်ပြင်လုံးနှင့်တောင်ထိပ်အထိ ကိုင်းတော်များသာ ပေါက်ရောက်ပြီး တောင်၏ အနောက်မြောက်ခြမ်း တွင် ထင်းရှူးပင်များ လှပစွာ ပေါက်ရောက်သည်။ ကိုင်းတော် ပေါက်ရောက်သော တောင်ဆင်ခြေလျှော ဒေသများ နှင့် တောင်ထိပ်များတွင် စိုင်၊ ဆင်၊ ဒရယ်၊ ဂျီ၊ တောဝက် စသော တိရစ္ဆာန်များ ကျက်စား ပျော်မြူးကြသည်ကို တွေ့ရ ကြောင်း သိရပါသည်။ ဘေးမဲ့တောအဖြစ် သတ်မှတ် ဆောင်ရွက်ပါက အလွန်လှပသော တောင်စခန်းနှင့် ယဉ်ပါး သိမ်မွေ့သော တောတိရစ္ဆာန်များ တွေ့ရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
(က) ကောက်သစ်စားပွဲ (Nlung Nnan Shs Poi)။ နှစ်စဉ် နိုဝင်ဘာလတွင် နေရာ အနှံ့အပြား ကျင်းပသည်။
(ခ) နွမ်ရှန်နတ်ဂျော့ပွဲ (Num Shang Nat Jaw Poi)။ နတ်ကိုးကွယ်ကြသော ကချင်တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ တစ်ရွာလုံး ကျင်းပသော ပွဲတော်ဖြစ်သည်။ နှစ်စဉ် တစ်နှစ်နှစ်ကြိမ် မေလခန့်မှှ ဒီဇင်ဘာလခန့်တို့တွင် ကျင်းပသည်။
(ဂ) မနောပွဲတော် (Ma Naw Poi)။ ကချင်တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုတို့၏ ရိုးရာ ဓလေ့ထုံးစံများအရ ကျင်းပသော ပွဲလမ်းသဘင်များတွင် မနောပွဲမှာ အကြီးကျယ်ဆုံး အခမ်းနားဆုံး ဖြစ်သည်။ ရွာတစ်ရွာသာမက နယ်မြေတစ်ခုလုံးရှိ လူများ အားလုံး ပါဝင် ဆင်နွှဲသော ပွဲ ဖြစ်သည်။ အနည်းဆုံး (၄)ရက်မှ (၈)ရက်အထိ ကြာမြင့်ပါသည်။ မနောပွဲကို အကြောင်း အမျိုးမျိုးဖြင့် ကျင်းပကြသဖြင့် အောက်ပါ အမျိုးအစား (၅)မျိုး ရှိကြောင်း လေ့လာ သိရှိရပါသည်။
(၁) ပဒန်မနော (Padang Ma Naw)။ စစ်အောင်ချိန်တွင် အောင်ပွဲခံ ကျင်းပသည့် မနောပွဲ ဖြစ်သည်။
(၂) ဆွမ်မနော (Sut Ma Naw)။ ဥစ္စာဓန တိုးပွား ကြွယ်ဝလာသည့်အခါတွင် ကျင်းပသော မနောပွဲ ဖြစ်သည်။
(၃) ဂျမနော (Ja Ma Naw)။ အိမ်သားများ မကျန်းမမာ ဖြစ်ဖန် များလာသည့်အခါနှင့် အဖိုးအို အဖွားအိုများ ကွယ်လွန်သည့်အခါ နောင်ဘဝ ကျန်းမာသုခနှင့် ပြည့်ဝလာစေရန်အတွက် ရည်မှန်း၍ ဆုမွန်တောင်း ကျင်းပသော မနောပွဲ ဖြစ်သည်။
(၄) ဂွမ်ရမ်မနော (Gumran Ma Naw)။ အိမ်ထောင်တစ်ခုမှ အိမ်သား ဖြစ်သူ ညီအစ်ကို တစ်ဦးဦးက အခြားနယ်မြေ သို့ ပြောင်းရွှေ့ နေထိုင်လိုလျှင် မဒိုင်နယ်ကို ဝေခြမ်း ပင့်ဆောင်ယူသော အထိမ်းအမှတ်ဖြင့် ကျင်းပခြင်း ဖြစ်သည်။ မဒိုင်နတ် မရဘဲ မနောပွဲ ကျင်းပရိုး မရှိပါ။
(၅) ရှဒပ်မနော (Shadip Ma Naw)။ နယ်မြေသစ် တည်ထောင်ပြီး မဒိုင်နယ်ကို ကျန်ရစ်သူ ညီအစ်ကိုများထံမှ ဝယ် ခြမ်း ပင့်ဆောင်လာ၍ နယ်မြေသစ်တွင် ရှိသော မကောင်းဆိုးဝါးကောင်များအား နှင်ထုတ်သော အထိမ်းအမှတ်ဖြင့် ကျင်းပသော ပွဲ ဖြစ်သည်။
(ဃ) ပျားပဒုဖွတ်ပွဲဲ (Gat Shang La Poi)။ နှစ်စဉ် နိုဝင်ဘာလတွင် ကျင်းပလေ့ရှိသည်။ ပျားပဒုကို ကချင်တိုင်းရင်း ဘာသာစကားဖြင့် ဂတ်ရှန် (Gat Shang) ဟု ခေါ်ပြီး ပျားမျိုးတကာ၏ ဘုရင်မျိုးဟု မှတ်ယူကြသည်။ ပျားပဒုအုံမှာ စကောကဲ့သို့ စက်ဝိုင်းသဏ္ဌာန် ရှိသော အချပ်(၆)ချပ်မှ (၁ဝ)ချပ် အထိ အထပ်လိုက် ရှိပြီး (၁)ချပ်လျှင် အချင်း ၃ ပေမှ ၅ ပေအထိ ရှိကြပါသည်။ ဤကဲ့သိုသော ပျားမျိုးကို လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးနှစ်ဦးဖြင့် မှတ်ယူစားသုံးခြင်းအား ရွာစောင့်နတ် များ မကြိုက်ဟု အယူရှိကြပါသည်။ ရွာလူထုမှာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဝိုင်းဝန်း စုပေါင်း ဖွတ်စားပါမှ နတ်ကြိုက်သည်ဟု အယူ ရှိကြပြီး ရွာလူထုမှ ပွဲတော်တစ်ရပ် အဖြစ် ပျော်ရွှင်စွာ ဖွတ်စားကြပါသည်။
အင်ဂျန်းယန်သည် ကချင်စကား ဖြစ်ပြီး ၄င်း၏အဓိပ္ပါယ်မှာ အင်ဂျန်းသည် အင်ဂျန်းဒူးဝါး တည်ထောင်ခဲ့သော နေရာ ဖြစ်ပြီး ယန်မှာ မြေပြန့်ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ အင်ဂျန်းယန်မှာ အင်ဂျန်းဒူးဝါး တည်ထောင်ခဲ့သော မြေပြန့်ဟု အဓိပ္ပါယ် ရပါသည်။ အင်ဂျန်းယန်မြို့နယ်သည် နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ် လက်ထက်မတိုင်မီက ကချင်ဒူးဝါးကြီးများက နယ်မြေပိုင်းခြား သတ်မှတ်ပြီး အုပ်ချုပ်ခဲ့သော ​နယ်မြေ ဖြစ်သည်။ ၁၉၂ဝ တွင် နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်က တောင်တြိဂံနယ်မြေ ယခုအခေါ် အင် ဂျန်းယန်နယ်မြေသို့ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ဆွမ်ပရာဘွမ်ဆောင် တောင်တန်းဝန်ထောက်၏ လက်အောက်၌ အင်ရော်ကောင်တောင်အုပ်နှင့် အင်ဂျန်းယန်တောင်အုပ်၊ ၂ ဦး ခန့်ထား၍ အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ ထိုစဉ်အခါက ကျေးရွာ အုပ်စု (၁ဝဝ) နှင့် ကျေးရွာငယ် (၃၉၄) ရှိသည်။ ၁၉၆၅ ခု၊ အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် မြို့နယ်အဆင့် ဖွဲ့စည်း သတ်မှတ်ခဲ့သဖြင့် အင်ဂျန်းယန်မြို့နယ်ဟု ခေါ်ဆိုခဲ့သည်။ (ကချင်ပြည်နယ်တွင်းရှိ မြို့ရွာအမည်များ လေ့လာချက်)
စုမတြာကျွန်း၊ ဂျာဗာကျွန်း၊ ဘိုနီယိုကျွန်းအနောက်ပိုင်း၊ စီလီဘီကျွန်း၊ နယူးဂီနီကျွန်းအနောက်ပိုင်း၊ အီရယန်စသည် နှင့် စုစုပေါင်း ကျွန်းငယ်များ (၃ဝဝဝ)ခန့်သည် အင်ဒိုနီးရှား သမ္မတနိုင်ငံအဖြစ် ၁၉၅ဝ ပြည့်နှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁၅ ရက် နေ့တွင် ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ခဲ့လေသည်။ ယခင်က အရှေ့အိန္ဒိယကျွန်းစုဟု တွင်ခဲ့သည်။ (ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ အဘိဓာန်)
အင်ဒိုနီးရှား ပထမဆုံး ရွေးကောက်ပွဲ
အင်ဒိုနီးရှားပြည်တွင် ပထမဆုံး အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးကို ၁၉၅၅ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၂၉) ရက်နေ့၌ ကျင်းပ ခဲ့သည်။ (ဗဟုသုတဒိုင်ယာရီ-တွဲ-၇)
အင်ဒိုနီးရှားပြည်သို့ ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒနှင့်ကွန်မြူနီဝါဒတို့ကို မျိုး​ချခဲ့သူများမှာ ဒတ်(ချ်)လူမျိုးများ ဖြစ်ကြသည်။ (ဗဟု သုတဒိုင်ယာရီ တွဲ ၇)